Waxaa qoray Cadnaan Xuseen oo Muqdisho jooga
Juunyo 04, 2012
Guul-darooyinkii dhinaca millitariga ahaa iyo kala qaybsanaanta dhinaca aragtida ayaa dhalisay in qaar ka mid hoggaamiyayaasha al-Shabaab ay ka wada hadlaan inay abuuraan koox ka soo go'da ururka al-Shabaab si ay ugu soo biiraan nidaamka siyaasaddeed ee Soomaaliya hada ka hana qaaday iyo inay ka laabtaan xeeladaha fawdada leh ee ay al-Shabaab adeegsato, sida uu masuul sare oo ka tirsan al-Shabaab u sheegay Sabahi. Xubno looga shakiyay inay al-Shabaab ka tirsanayeen oo gaari wayn korsaaran ka dib markii ay soo qabqabteen ciidamada Soomaalida xilli ay fulinayeen hawlgal maalintii Sabtidii (June 2-deedii) oo ay haraagii ka haray al-Shabaab kaga soo saarayeen goobaha ay kaga dhuumanayeen Ceelasha Biyaha. Kooxda waxaa dhawaan la soo deristay guul-darooyin xiriira, kuwaasi oo ay ku jiraan Afmadow, Afgooye iyo goobo kale oo ay awood ku lahaayeen. [Mohamed Abdiwahab/AFP]
Qaxootiga Soomaaliyeed ee Yaman oo wali dareemaya musiiboyinki Al-Shabaab
Dagaalyahannada shisheeye ee al-Shabaab oo lagu arkay Shabeellada Hoose
Iyadoo ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalidu ay qabsadeen goobo muhiim ah iyagoo ka soo weeraray jihooyin kala duwan, ayaa hadana xubnaha ka tirsan al-Shabaab waxaa soo food-saartay khilaaf hoose oo wayn oo soo kala dhex-galay, sida uu sheegay qof madaxa, oo codsatay in aan magaciisa la sheegini. Koox ka kooban hoggaamiyayaal sare oo ka tirsan al-Shabaab ayaa hada ku kulmaaya tuulada Janaale oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose si ay u sameeyaan koox cusub oo ka go’day ururka al-Shabaab, iyagoo taageero ka helaaya qaar ka mid ah qabaa’ilada Soomaaliyeed, iyadoo ujeedadoodu tahay in ay wada-hadalo siyaasaddeed la yeeshaan masuuliyiinta dawladda Soomaaliyeed ka dib marka la gaaro mudada loo qabtay ee August si loo soo dhamaystiro xukunkii ku-meel-gaarka ahaa.
Hoggaamiyayaasha gooni u goosadka ah oo uu ku jiro Sheekh Xasan Daahir Aways, oo dhawaan soo saaray warbixinta rasmi ah oo uu ku eedaynayo madaxda kale ee al-Shabaab inay daadinayaan dhiiga dadka Muslimiinta ah iyagoo magaca diinta Islaamka ku dilaaya dadka aan waxba galabsan ee rayidka ah. Kuwa kale waxaa ka mid ah Sheekh Mukhtaar Robow Ali, oo loo yaqaano Abu Mansuur, Sheekh Maxamed Ibraahim, oo loo yaqaan Bilaal, Sheekh Xasan Yacquub, oo masuul ka ah Kismaayo, oo ciidamada AMISOM ay sheegeen inay gacmahooda soo gali doonto toddobaadyo guddahood.
Madax goboleedyada kale ee al-Shabaab ee ku kulmaaya Janaale waxaa ka mid ah, Sheekh Yuusuf Ciise, oo loo yaqaan Kabo-kutukade oo masuul ka ah Shabeellada Dhexe; Sheekh Maxamed Cabdilaahi Xiirey, oo magaca uu isticmaalaa yahay Sheekh Maxamed Abu Abdalla, isagoo mas;uul ka ah Shabeellada Hoose; Sheekh Yuusuf Cali Ugaas oo ka socda Hiiraan; Sheekh Cali Maxamed Xuseen, oo ahaan jiray hoggaamiyaha al-Shabaab ee Muqdisho; iyo Sheekh Cabdifataah Maxamed Cali, oo ahaan jiray xisaab hayihii ururkii burburay ee Xisbul Islaam. Madaxdu waxay hada soo dhamaystirayaan meesha ay taagan yihiin isbahaysiga cusubi, taasi oo ay suurta-gal tahay in lagu dhawaaqo toddobaadyo guddahood, sida uu sheegay hoggaamiye ka tirsan al-Shabaab. Wuxuu hoggaamiyuhu sheegay inuu kulan kale ka socdo magaalada Baraawe, oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, waxaa dadka kulankaasi u socdo ka mid ah hoggaamiyayaasha xagjirka ee al-Shabaab. Kuwaasi oo ay ku jiraan: Axmed Cabdi Godane, oo loo yaqaan Sheekh Mukhtaar Cabdiraxmaan Abu al Zubair, oo ah amiirka al-Shabaab; ku-xigeenkiisa Mahad Warsame Qaley, oo sidoo kale loo yaqaan Mahad Kaaratee; Sheekh Fu’aad Maxamed Khalaf oo sidoo kale loo yaqaan Fu’aad Shangole, isagoo masuul ka ah taageerada iyo dacaayada; Sheekh Xuseen Cali Fiidow, oo masuul ka ah siyaasadda iyo arrimaha gobolka; Sheekh Cali Mohamuud Raage, oo loo yaqaan Cali Dheere oo ah af-hayeenka rasmiga ah ee kooxda; Sheekh Cabdicasiis Abu Musa’ab, oo ah af-hayeenka dhinaca millitari ee kooxda; Sheekh Maxamed Xasan Cumar, oo loo yaqaan Maxamed Abu Cabdiraxmaan, oo ah hoggaamiye al-Shabaab u qaabilsan Muqdisho.
“Axmed Godane wuxuu iska indho-tiray codsiyo ugu baaqayay inuu ka dego xilka madaxnimo ee kooxda, isagoo ku doodaya in amiirku sida kaliya ee uu xilka ku waayi karaa ay tahay inuu dhinto, laakiin aanu ahayn qof is-casili kara ama lagu khasbi karo inuu is-casilo,” sarkaalka ayaa u sheegay Sabahi. Tani waxa ay dhalisay kala-qeybsanaan. Amaro ay bixiyeen laba kamid ah hogaamiyayaasheena, Mukhtar Robow iyo Hassan Dahir oo ku baaqaya in la cirib-tiro qaar kamid ah dagaalyahanada ajaanibta ah oo lagu eedeeyay jaajuusnimo ayaa la iska indho tiray."
Bishii April, waxaa soo baxay warar sheegayay in al-Shabaab ay dishay Jihaad doonka Maraykanka ku dhashay ee Omar Hammami, ee loo yaqaan Abu Mansoor al-Amriki, kaasi oo sida warku sheegay lagu dilay amar ka yimid Godane. Inkastoo la sheegay in Hammami la arkay isagoo nool, hadana al-Shabaab ma soo saarin hadal tilmaamaya xaalada uu ku sugan yahay kaasi oo sii hurinaya wararka sheegayay inuu qoqob qoto dheeri ka dhex jiro kooxda dhexdeeda.
Isbahaysiga al-Shabaab la leedahay al-Qaacida ayaa sidoo kale keenay khilaaf soo kala dhex-gala madaxda al-Shabaab, sida uu sheegay hoggaamiyaha ka tirsan ururku. “Waxaan sidoo kale diidnay inaan dadka shisheeyahaha u magacawno hoggaamiyayaal sare, midayn al-Shabaab lala midaynayo al-Qaacida si loo dilo dadka aan waxba galabsan iyadoo aanan jirin sabab kali ahi,” ayuu hoggaamiyaya ururka ka tirsani sheegay. “Waxaan diidnay weerarada is-miidaaminta ah iyo beegsiga la beegsanayo dadka rayidka ah iyo shaqaalaha hay’adaha sam-falka.”
Xubnaha al-Shabaab oo ka cabsi qaba ‘mustaqbal aan cadayn’
Sarreeye gaas Cabdilaahi Cali Cagey, oo ah abaanduule ka tirsan cutubka labaad ee ciidamada Soomaalida, ayaa yiri kooxaha al-Shabaab ka tirsani waxay ka cabsi qabaan mustaqbal aan la garanayn wuxuu ku dambaynayo, sababtoo ah waxay dareemayaan isbadalo waawayn oo jira oo dib loogu soo celinayo qaab-dhismeedka dawladda, sidoo kalena lagu xoojinayo awooda millitari iyo hay’adaha ammaan sida uu dhigaayo Roadmap-ku
Militari ahaan, kooxda isbahaysiga la leh al-Qaacida waxaa la soo gudboonaaday dhibaato qoto dheer ka dib markii ay lumiyeen Afgooye iyo meelaha ku xeeran, waxayna u egtahay inay qarka u saaran yihiin inay lumiyaan magaalada dekada ah ee Kismaayo, taasi oo ah meesha dhaqaaluhu ka soo galo. Cagey ayaa sheegay in ciidamada Soomaalida, oo taageero ka helaya ciidamada ka socda Afrika, ay si wada jir ah ay toddobaadyada dhawrka ah ee soo socda abaabuli doonaan weeraro xoog leh kaasi oo la isku dayayo in lagu soo qabqabto hoggaamiyayaasha al-Shabaab. Al-Qaacida waxay la dhibaataysan tahay dib u dhacyo xiriir ah oo soo gaaray. Waxaan dhawaan awoodnay in aan gaarno guulo sababtoo ah waxaan galnay goobtii ay xooga ku lahaayeen, iyagoo awoodi waayay inay na joojiyaan,” ayuu Cagey u sheegay Sabahi. "waan ka war qabnaa khilaafka qotada dheer ee ka dhex jira kooxda mayalka adag, waxaanan si dhakhso ah u awoodi doonaa inaan qabsano magaalooyinka hoos yimaada xukunkooda.” Cagey wuxuu sheegay in haraagii ka haray al-Shabaab ay u baxsanayaan Buuralayda Golis iyo koonfurta Yemen. Waxa uu yiri al-Shabaab waxay ku sugan yihiin xaalad cakiran iyagoo koox ahaan sii dhimanaaya, iyadoo xubnaha ka tirsan ururkana ay muujiyeen sida aanay ugu farax sanayn waxqabadka kooxda. Hawl-gakal wadajirka ah ee ay ciidamada Soomaalida iyo kuwa AMISOM ka samaynayaan guud ahaan dalka ayaa dhawaan la kordhiyay, kaasi oo sababay dhimashada iyo dhaawaca kuwo badan oo ka tirsan dagaalyahannada kooxda xiriirka la leh al-Qaacida. Sarreeye gaas Cabdi Mahdi Cabdisalaam, oo ah madaxa hawl-galada ciidamada Soomaalida ee gobolka Jubada Hoose, ayaa sheegay in al-Shabaab ay ka walwalsan tahay guulaha ay ciidamada dawladdu ka gaareen gobolada Shabeellada Hoose iyo Jubada Hoose. “Ciidamadayadu hore ayay u sii siqi doonaan anagoo dhulka ku socon doona si aan u qabsano dhufaysyadooda ay ku leeyihiin gobolka Shabeellada Hoose ilaa aan ka awoodayno inaan u ruqaansano ilaa dhanka Kismaayo,” ayuu Generaalku ku sheegay waraysi telefoon oo laga qaaday isagoo ku sugan magaaladii dhawaan la qabsaday ee Afmadow. “Si dhakhso oo aanan shaki lahayn ayaan u noqon doonaa kuwo guulaysta. Tani waxaa sabab u ah iyadoo [al-Shabaab] ay la soo darsayso dhaqaale burbur iyo iyagoo qalajiyay sanduuqii dhaqaale iyo waxyaalihii kale ee ay haysteen, iyadoo aan la tilmaamaynin rasaas yaraanta la soo deristay taasi oo wax u dhintay difaacoodii sidoo kalena ku keentay jiritaan la’aanta meel ammaana oo ay u jeestaan. ” Dawladda Soomaalida ayaa dhawaan ku dhawaaqday inay siinayaan $500 oo doollar muwaadiniinta la yimaada macluumaadka horseeda xariga ama dilka kooxaha ka tirsan al-Shabaab. Madax hore oo al-Shabaab ka tirsanaana waxay ku dhawaaqeen rabitaankooda ku saabsan inay cambaaraynayaan oo ay ka taasulayaan ka tirsanaanta kooxda, iyagoo dadka Soomaaliyeed waydiistay inay cafiyaan. Muxuu kula yahay qoraalkan?
(Codadka oo dhan 381)
July 5, 2012 @ 07:19:52AM
Waa wax lagu qoslo inuu qofku intuu qori isla sara taago uu ku dhawaaqo inuu magaca ilaahay in ilaahay dartii uu u dagaalamayo. Miyuusan qofkaasi ogayn in Ilaahay uu kalidii la dagaalami karo jin iyo insiba dhamaantood, isagoon wax caawimo iyo gargaar aan u baahnayn. Dadka dadkale laaya iyagoo ku andacoonaya inay ilaahay ama diinta darteed u dagaalamayaan, dadkaasi waa gacan ku dhiiglayaal, waxaanay ku abtirsadaan shaydaanka oo aabohood ah. Dadkani waxay sameeyaan oo ku dhaqmaan wixii ay aabohood ka arkeen ama ka maqleen. Haseyeeshe, qofka waxaa u wacan inuu noqdo qof wacan oo dadka jecel, haddii sidaas la yeelana qof waliba wuxuu dareemi doonaa is-xaq-dhawar iyo is qadarin.
July 4, 2012 @ 06:32:42AM
Waa wax laga murugoodo in dad badani ay dagaalkan ku naf waayeen. Su’aasha ay alshabaab tahay inay iswaydiisaa waxa weeyaan: ilaahay miyuu dadka aan islaamka ahayn ku xukumay dagaal? Jawaabtu waa maya. Alshabaab waa inay dadka quluubtooda iyo ruuxdooda hanataa, iyadoo adeegsanaysa wacdiga iyo hababka kale ee aan gacan ka hadalka lahayn. Weerarada lagu qaadayo dumarka iyo caruurta iyo ragga aan waxba galabsan maaha wax faa’ido keeni kara haba yaraatee. Markaa waa in hoggaamiyayaashoodu ay la yimaadaan ajande siyaasadeed oo aysan la imanin mid diimeed. Alshabaab in badan ayaa caleen qoyan loo fidiyay, iyadoo laga dalbay inay miiska wada hadalka soo fadhiistaan, si la isula meel digo habka loosoo gabo gabayn karo loolankan jira, laakiin waxay si madax adayg leh ugu adkaysteen in habkoodu oo yahay kan kaliya ee wax maarayn kara – habkaasoo ah in dadaan waxba galabsan la laayo. Ceebi ha ku dhacdo dhamaan cidii diinta u adeegsata inay dad aan waxba galabsan ku layso, iyagoo dadkaasi masaajido iyo kaniisado jooga.
July 3, 2012 @ 08:48:11AM
Timbukti….waan ka helay sida aad arrinka u gorfaysay, waxaanan kuu sheegayaa inaysan jirin cid kugula nool dunida aad ku nooshahay. Waxaad ku nooshahay duni khayaali ah oo ku dhisan af-miinshaarnimo iyo dagaalo iyo la noolaansho la’aanta dadka kale. Waan kugu raacsanahay fekerkaaga ah in alshabaab ay guulaysan doonto, laakiin arrinkaasi wuxuu dhaboobi karaa marka ay mucjiso dhacdo.
July 2, 2012 @ 10:46:57AM
waa maqaal wacan......alshabaab waxaan leeyahy isdhiiba
simon kampisa bodo shululu
July 2, 2012 @ 04:51:23AM
Anigu sidaan qabo, way adagtahay in si kama dambays ah alshabaab loo dabar-gooyaa, laakiin awoodooda waa la wiiqi karaa. Sidaa awgeed, weerarada gaadmada ahi way sii socon doonaan, inkastoo ay tiradoodu dhinmi doonto, markaa waa in la kordhiyaa hababka iyo talaabooyinka lagula tacaalayo kooxdan, si hoos loogu dhigo awoodooda.
June 30, 2012 @ 08:29:52AM
waxaan leeyahay Kenya shaqo wacan ayay qabatay, laakiin waxaan jecelehay inaan ogaado tirada dadkan alshabaab ee ay soo qaban kari laayi’iin. Sidoo kale, waxaan soo jeedin lahaa hadii aysan ka takhalusi karin, waa inay meesha isaga soo baxaan, sababtoo ah koox yari cagta hoosteeda galin kari mayso khalqiga ilaahay ee aan waxba galabsan.
cccchristopher omondi odero
June 29, 2012 @ 04:07:09AM
Warkani waa war wacan. Dadka soomaaliyeed waa in la caawiyaa si ay u fahmaan in nabadu ay tahay shay wacan oo lagama maarmaan u ah horumarka dhaqan-dhaqaale iyo ka siyaasadeed ay dal kasta oo dunida ka jira. Sidaa awgeed, waa inaan dambiilayaashu ka faa’idaysan dadka oo aysan marinhabaw ku ridin, oo aysan fahansiinin in kooxda alshabaab ay haba yaraatee islaamka difaacayso. Waa diintee diinta ogol in si bilaa sharci ah loo dilo qof bini’aadam ah? Diinta kiristaanka, ta islaamka, buudhiisamka iyo hinduugu intuba waxay aaminsan yihiin in dilku yahay shay xaaraan ah, markaa alshabaab doodeedu sal iyo raad midna ma laha.
June 28, 2012 @ 01:20:00PM
Anigu waxaan ahay qof muslim ah, waxaanan gabi ahaamba diidanahay inaan aqbalo dacaayadaha la faafinayo, mana aaminsani afkaarta warbaahinta danaha reer galbeedka u adeega. Waxa aan anigu ka war hayaa waxa weeyaan dadka aan muslimiinta ahayni, gaar ahaan reer galbeedku, waxay baadi goob ugu jiraan inay helaan waddo ay nabiga (NNKHA) ku xajiimeeyaan oo ay dadka muslimka ahna magacyo ugu bixiyaan kuna laayaan. Laakiin dadka muslimiinta ah dhexdooda waxaa ku jirta koox la af-duubay oo raacday ilaahay cadawgiisa. Anigu arrinkaas waan ka warwarsanahay, mana aaminsani in waxa ay warbaahintu alshabaab ka sheegtaa uu run yahay, mana badali doono dariiqa aan ku socdo, laakiin ilaahay iyo nabigiisaba waan jecelahay, mana ihi qof raba in uu dunida cajabiyo. Hadii aad rabtaan I dila, laakiin anigu ku biiri maayo kooxo ilaahay iyo nabigiisa u cadaw ah, waxaanan ogahay inay dadkaasi yihiin beenaaleyaal, oo ay marin-habaabiyeen qaar badan oo ka mid ah qalabka warbaahinta, iyo waliba xataa mashaayikhda qaar. Markaa in aniga taasi igu dhacdo waxaan ka xigaa geeri, hadaad rabtaana igu sheega alqaacidda si aad ii dishaan, laakiin anigu waligay aqbali maayo inaan ilaahay iyo nabigiisa khiyaameeyo oo aan dacaayad faafiyo, mana jirto qalabka warbaahinta cid aan ku kalsoonahay. Markaa waan ku noolaan doonaa dunida noocan ah, ilaa inta uu ilaahay iga kaxaynayo dhagaraha la maleegayo oo aan dhimanayo.
asie ogopa makafri
June 28, 2012 @ 12:30:58PM
ilaahay waxaan ka baryayaa in gaalada dhamaantood la jabiyo, hadaan si daacad ah u hadlana, nidaamka nacasnimada ah ee dimuqraadiyadu waa ruwaayad wayn. Nidaamka raasamaaliga ahi isaga laftiisu waa mid aan maskaxi ka dambaynin oo aan macne badan samaynin, sababtoo ah wuxuu nidaamkani dhigayaa oo aaminsanyahay ahmiyada wadaninimada iyo muwaadinka, laakiin marka dadku go’aansadaan inay iyagu is xukumaan, ayda caddaanka ah ee reer galbeedka ayaa arrinkaa is hortaag ku sameeya, iyagoo usoo maraya bisadaha maqaarsaarka ah ee afrikaanka u taliya. Sidaa awgeed, su’aashu waxa weeyaan waa maxay macnaha ay muwaadinimadu dadka soomaaliyeed ugu fadhidaa? Miyaysan ahayn in dadka soomaaliyeed faraha laga qaado, si ay u go’aamiyaan waxay naftooda la rabaan? Laakiin afrika waxaa wali ka jira dad taageersan doofaarada caddaanka ah, intooda badanina way necebyihiin diinta islaamka. Laakiin dadkaasi ha ogaadeen in diinta islaamku ay dhawaan dib usoo ceshan doonto muunadeedii iyo meeqaankeedi, waxaanay mar labaad noqon doontaa hab-nololeedka saxda ah ee quman ee bini’aadamku ku noolaan doono.
June 27, 2012 @ 06:56:51AM
soomaaliya waxay waligeed ahaanaysaa goob dagaal, wax nabad ahina iman mayso inta ay AMISOM hogganka u hayso. Qofkastoo muslim ahna waxaa ku waajib ah inuu daafaco muslimiinta kale, qofkii qof muslim ah khiyaameeyaana waa munaafaq. Ugu dambayntana kooxda alshabaab ayaa guulaysan doonta.
June 27, 2012 @ 04:22:46AM
Wada hadal lala galo gacan ku dhiiglayaasha khatartiisuu leehay, markaa waa in marka hore la laayaa kadibna wadahadal loo furaa dadka rayidka ah! Kooxda alshabaab waa in la cidhib tiraa marka hore intaan wax kale la guda galin!
June 26, 2012 @ 03:38:19AM
Kooxda alshabaab waa in la burburiyaa waayo waxay yihiin gacan ku dhiiglayaal. Waxaan ugu baaqayaa dadka fikradaha iyo aragtiyaha cusub lihi inay siyaasiin noqdaan, oo ay meel iska dhigaan siyaasadaha fawdada ku salaysan ee sababta u dilka dad aan waxba galabsan. Sidoo kale, mujtamaca dunidu waa inuu taageeraa dadaalka ay wadaan ciidamada AMISOM iyo kuwa soomaaliyeedba.
June 23, 2012 @ 04:53:24AM
Haloo ogolaado in ay hubkooda iska dhigaan.
June 23, 2012 @ 01:39:44AM
Qofkastaa nabada ayuu jecelyahay, sharkana wuu necebyahay, dunidana kama jirto diin fasaxaysa daadinta dhiiga qof bini’aadam ah oo kale, dadka noocaas ah ee arimahaa gaystana nacalad ayaa ku dhacda. Ilaahay wuxuu inoo abuuray inaynu u noolaano sidii caruur hoy kaliya ku wada nool, kuwaasoo midkoodba midka kale uu jecelyahay. Markaa suurto gal maaha in nolosheenu hub iyo dagaal ku dhisnaato, qof dambiile ahna waxba lagalama hadli karo. Dhanka kale, dadka kiristaanka ah iyo kuwa muslimiinta ahba waxaa ku waajib ah in midkoodba midka kale uu jeclaado, waayo ilaaha aya labada kooxood ba caabudaan waa ka dhamaanteen ina uumay. Kooxda alshabaab dadka ka tirsani waa caruurteenii, waxaanan jeclaan lahaa inay hormood ka noqdaan ilaalinta qaarada afrika nabadeeda. Waxaa ku waajib ah inay caawiyaan dhamaan dadka u baahan in la caawiyo, sida caruurta, dumarka iyo dadka waawayn, si dadkaasi ay cimroogada iyo noloshooda si wanaagsan u qaataan oo ah siduu ilaahay la rabo. Maaha in dadkaasi itaalka daran welwel iyo argagax lagu rido, oo ay kadibna ka yaacaan guryohooda.
June 23, 2012 @ 12:17:49AM
Soomaaliya noqon mayso meel nabad ah ilaa inta alshabaab la waayayo oo ay noqonayaan wax dhintay iyo wax libdhay! Alshabaab waxay aad jahada saxan uga weecinayaan horumarka ka socda dalalka bariga iyo badhtamaha afrika, taana waxaa kasii daran magac-xumada ay usoo jiideen dadka muslimiinta ah, kuwaasoo ay ka dhigayaan dad argagixisada taageersan, arrinkaasoo ah midaan waxba ka jirin haba-yaraatee. Markaa waxaan ciidamada amisom leeyahay kooxdan gabigeedaba tirtira. Ciidamada difaaca ee kenyana waxaan leeyahay shaqo wacan ayaad qabateen, ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu korkiina yeelo nimcadiisa.
June 22, 2012 @ 04:36:59AM
Waxaan leeyahay, xitaa marka aynu amaanayno ciidamadeena ka dagaalamaya jiida hore ee dagaalka, waa inaynu ka fikirnaa dadka soomaaliyeed ee aan waxba galabsan ee dhibaatadu haysato iyaga iyo jiilalalkooda soo socda, sababtoo ah dadkan waxay dib u dhisida dalkoodu ku qaadan doontaa qarniyo badan. Anigu waxa kaliye ee aan taageersanahay waa sadex arimood, oo laga yaabo inaysan dadku u riyaaqin, arimahaasina waa – wada hadal, dib u heshiisiin, iyo isku duubnaan. Dadka soomaaliyeed waxay xaq u leeyihiin inay nabad helaan.
June 21, 2012 @ 03:17:57AM
Dadka soomaaliyeed waxay u baahanyihiin nabad, sidaa awgeed, waa inay arrinkaa la socdaan dadka maal-galiya koxda alshabaab meeshay doonaan ha joogeene. In dadka dilkooda qiil looga dhigo dagaal ayaan ku jirnaa maaha arrin caqliga u cuntami kara. Dhanka kale, waa in si dhakhso ah loo qabsadaa dakadda kismaayo, si loo jaro maal-galinta ay kooxdani ka helayaan budhcad badeeda. Sidoo kale, waa in la ogaadaa in dagaalkani uusan ahayn mid ka dhexeeya muslim iyo kiristaan, balse uu yahay dagaal lagu doonayo in dadka soomaaliyeed loogu sameeyo bulsho nabad ah oo la mid ah aduunka intiisa kale. Dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay nabada fursad siiya oo dibada u tuura cid kasta oo alshabaab ah oo idinku dhex jirta, waayo in dhibaato idiinku filan waad soo dhibaatooteen.
June 20, 2012 @ 10:08:23AM
Aniga waxay ila tahay way wacan tahay in dagaalka soo afjarmo, oo ay kooxda isku magacawda alshabaab ee wuxuushta ah gabigood la laayo.
June 20, 2012 @ 09:39:35AM
Hambalyo ciidamadeena geesiyaasha ahoow, alshabaab meesha waa ka baxeen.
June 20, 2012 @ 07:39:22AM
Sideebuu dareenkaagu yahay marka aad ogaato in inkabadan hal milyan oo ruux ay ku nool yihiin xeryo qaxoonti, oo dumar iyo caruur macaluuli soo foodsaartay, iyagoo aan haysan biyo iyo mustaqbal toona? Miyaadan dareemayn in dadkaas uu ilaahay jecelyahay? dawlada Kenya dadkaas labaatan sano in ka badan ayay martiqaadsanayd, laakiin waxaan rabnaa in soomaaliya ay hurdada ka kacdo oo ay ganacsi la gasho dalalka bariga afrika. Ilaahay miyuu idiin fasaxay inaad dadkiisa laysaan si aad diinta u badbaadisaan? Waxaan leeyahay ilaahay soomaaliya nabad ha siiyo, soomaaliyana islamarkay cagaheeda isku taagto, horumarku wuu bilaabmi doonaa. Dhalinyarada soomaaliyeed waa inay xaq u helaan inay gacan ka gaystaan horumarinta dalkooda soomaaliya, intay ku halaagsami lahaayeen xeryaha qaxoontiga, arrinkaasoo ceeb wayn ku ah qaarada afrika iyo hogaamiyayaasha afrkaanka ah. Hurdada ka kaca oo aan soomaaliya badbaadino!! Arrinkaana ama wada hadal haloo galo, ama qori caaradii halagu meel mariyo, ama labadaba haloo adeegsadee, soomaaliya waa in la badbaadiyaa. Dagaalo maalayacni ah in inagu filan waa soo marnay, ee intaasi ha inagu filaato.
June 20, 2012 @ 07:10:56AM
Maxay ku dhacday in meelkasta oo muslimiin ku nooshahay ay mashaakil yaalaan?
June 20, 2012 @ 06:18:58AM
Dhamaan dadka nabada jecel ee aduunka ku nool, gaar ahaan kuwooda qaarada afrika ku nool, iyo hogaamiyayaashooda waxaan ka codsanaynaa inay taageero iyo xoojin u fidiyaan ciidamada walaalahayaga reer Kenya, ee la dagaalamaya kooxahan bahaloobay ee cadaadiska ku haya walaaleheen, isla markaana khatar galinaya nabada qaarada afrika. Waxaan kaloon ka codsanaynaa dhmaan dadka ku nool dalalka badwaynta hindiya kulaalaya inay taageero noosoo fidiyaan oo ay noosoo mariyaan taageeradaas ciidamadeena amaanka, waana inaad sidaas yeeshaan markasta oo aad aragtaan in arrimo aan caadi ahayni ay jiraan, dhamaan muwaadiniinta afrikaanka ah iyo booliiskuba waa inay iska kaashadaan sidii ay u burburin lahaayeen kooxda alshabaab ee argagixisada ah. Waxaan soo jeedinayaa inaan muruqeena iyo maalkeenaba isku biirino.
June 20, 2012 @ 02:53:44AM
Usaama bin laadin waxaa loo arkaa inuu yahay ninkii ka dambeeyay aasaaska kooxdaha argagxisida ta ugu khatarsan, waxaanuu ku abuuray fikrad aad u khatar ah. Usaama bin laadin waxaa la dilay sanadkii hore, waxaanay taasi ka dhigantahay in kooxdaas uu aasaasay ay soo gabagabawday. Dhimashadiisu waxay kaloo ka dhigantahay digniin ku socota kooxaha kale ee argagixisad ah, digniintaasoo ah in kooxahaasi ay ugu dambayntii ku dambayn doonaan dhimasho, dhagaraha ay gaysteen awgeed. Kooxahaasi waa inay ogaadaan in sidii usaama bin laadin loo sii ugaadhsan doono. Arrin kaloo muhiim ah oo ay geerida usaama bin laadin keeni doontaa waxa weeye waxay kooxda tusi doontaa in mar hadii hogaamiyohoodii dhintay, aysan jirin sabab ay dagaalada usii wadaan. Sida la ogyahay, kooxo badan ayaa marka hogaamiyayaashoodu dhintaan ku dambeeya kala jab, waxaana haatan jira ifafaalayaal muujiniya in kooxda ay xubnihii ku jiray kasii socdeen oo ay taageeradii ay bariga dhexe ka heli jirtayna ay sii yaraanayso. Markaa geerida bin laadin ha u noqoto sabab ay kaga hadhaan dagaaladaas bilaa macniga ah.
June 20, 2012 @ 02:11:18AM
Waxaan maalin kasta ka maqalnaa idaacadaha iyo jaraa’idada falalka bahalnimada ah ee ay kooxda alshabaab ka fuliyaan goobkasta oo geeska afrika ka mid ah, arrinkaasina waa mid khalad ah. Kooxda alshabaab waxay dagaal kula jiraan dawlada federaalka ku meelgaadhka ah, laakiin waxay dagaaladoodaas ku galaaftaan dad rayida oon waxba galabsan. Waa arrin tiiraanyo leh in dadkaas dhiigooda si bilaa sabab ah loo daadsho. Laakiin arrinka ugu qalbi xanuunka wayni waa caruurta yaryar ee laga hor istaagay fursadaha waxbarashada, kuwaasoo lagu qasbo inay galaan dagaal aysan xitaa fahansanayn wuxuu yahay. Dhanka kale, waxa dumarka ku dhacda inay carmal noqdaan, waxaanay intooda badani ku dambeeyaan inay macaluul u dhintaan. Weerarada kooxdan alshabaab waxay xitaa cidhiidhi galiyeen oo adkaatay in caawimadda bulshada caalumku ay gaadho meelaha ay aadka u aafeyeen dagaallada, iyo macaluusha iyo xanuunku. Kooxaha argagixisada ahi waxay dhibaato u gaysanayaan dhaqaalaha Soomaaliya ee markiisa horeba kacaa-kufayay, arrinkaana waa in si aan ka gorgortan lahayn loo joojiyaa.
June 20, 2012 @ 01:18:33AM
Waa inaan sinaba wada hadal loola galin argagixisada! Hala laayo dhamaantood si mustaqbalkeenu u wacnaado.
June 19, 2012 @ 03:44:29PM
Aniga ilama aha in ilaahay raali ka yahay in qof bini’aadam ahi uu qofkale nafta ka qaado!! Gacan ku dhiiglayaashan dad aan waxba galabsan nafta ka qaadaya ee ku andacoonaya inay jihad wadaan waxaa la gudboon inay ka fiirsadaan falalkooda. Dadkani waxay rabaan inay diinta ka dhigtaan salaam ay u maraan ujeedooyinkooda oo ay faa’ido ku gaadhaan, xaqiiqdiina dadkan waxa lagu sheegi karaa munaafiqiin. Dhalinyarada la marin habaabiyay ee lagu yidhi ku biira kooxahan xagjirka ah, waxaan leeyahay ka fikira intaydaan sidaa yeelin, ogaadana in la idinku guurayo! Waa inaad mar kasta ogaataan in dilku yahay dambiga ugu wayn dunidan, ilaahayna wuu ciqaabi doonaa dadka wax laaya, mana heli doonaan wax abaal marin ah sida la idinka dhaadhiciyay. Dadka soomaaliyeed waxaan ugu ducaynayaa inay nabad helaan!! Alqaacida iyo alshabaabna waxaan leeyahay naarta ha la idinku fogeeyo!!
June 19, 2012 @ 11:19:05AM
Nabadu dadka soomaaliyeed dhamaantood ahamiyad wayn ayay ugu fadhidaa, sababtoo ah nabada la’aanteed mustaqbal lama heli karo. Dunidana maanta dimuqraadiyadii ayaa koone walba gaadhay, markaa kooxaha argagixisada ahi way adagtahay inay badbaadaan. Dhamaan bini’aadamku waxay xaq u leeyihiin inay nololoshooda si raaxo leh u noolaadaan, waana wax cadaalada ka baxsan in qof ama kooxi si cadaalad darro ah u go’aamiso masiirka dadka kale ee bulshada kula nool. Ilaahay hortiisa dadku way u wada siman yihiin, dadka soomaaliyeedna rajo ayaa u muuqata, markastana waan u duceeyaa iyaga, waanu iman doonaa wakhtigeedu. Dadka soomaliyeed waan hambalyaynayaa waxaanan leeyahay adadayg muujiya, rajadiina waay soo dhowdahay.
June 19, 2012 @ 11:13:18AM
Walaalayaasha soomaaliyeed iyo kooxda alshabaab, joojiya dagaalka aad aad sida arxan darada ah ugu kala jabinaysaan dalkiina. Yaad xukumi doontaan marka dadku madhaan? Dadkii waxay joogaan bilaa horumar, sababtuna waa dagaaladan. Yaa ka faa’idaya dagaalkan, mar haddii dadkii aad rabteen inaad xukuntaan ay yihiin kuwa dagaaladan ku dhimanaya ama ku naafoobaya? Muxuu yahay waxaad rabtaan oo cadaan u sheega? Ma dalkaad rabtaan, mise maal badan ayaad rabtaan, mise baatrool baad rabtaan, maxaad rabtaan?! Ilaahiina ka baqa, waayo isagaa og ujeedooyinkiina. Waa arrin aan sax ahayn in maalin kasta ay caruur iyo cirooleba dhagahooda dhawaqa rasaastu kusoo dhacdo. Aduunkuna wuu ka daalay inuu maqlo maalin kasta dagaaladiina aan kala go’a lahayn, haatana ma cada in waxa meesha joogaa ay yihiin dadkii soomaaliyeed ee hore ee la yaqaanay ee diinta qudha lahaa, iyo inay dadkani yihiin dad cusub oo beenaaleyaal ah. Hadii aad midaysan tihiin, ku laabta quraanka iyo sunada nabiga, oo xaliya khilaafaadkiina iyo is canaadka aad is canaadaysaan ee idinla hadhay, taasaanan idinkula dardaarmayaa. Arrinkani waa arrin niyad jab leh, waxaanan idin leeyahay qoryaha iska dhiga oo dhaqankiina kusoo laabta. Waxaad tihiin dad bariga afrika ka caana oo lagu yaqaano darawalnimadooda wacan, kuwaasoo markay qaadka cunaan aan daal dareemin. Waxaad tihiin dad lagu yaqaanay inay sijaayadohooda la safraan oo gawaadhidooda saaraan, maxaa markaa idinku dhacay? Runtii waxaa idin madax maray shaydaan iyo ayaan darro. Dadka soomaaliyeed waxay taariikh u lahaayeen ka ganacsiga idaha iyo riyaha la naaxiyay oo daabaxaad loo geeyo moosinka xakja ee magaalada barakaysan ee maka ka dhaca sanadkasta, taana waxay kala mid ahaayeen yamaniyiinta, oo iyaguna arrinkaas xirad u lahaa. Laakiin haatan arrimahaas waxba kama jiraan. Waxaan idin leeyahay naftiina dib u habeeya. Waa amigo ah walaalkiin Bashir O.m Kashangaki Dar-Es-Slaam,Tanzania Wasalaam
June 19, 2012 @ 11:05:13AM
Alshabaab sinnaba uga baxsan maayaan in jab soo gaadho. Kooxahan xagjirka ahi waxay ku mashquulsanyihiin khasaarinta maalka iyo wakhtiga, intay wax faa’ido leh ka shaqayn lahaayeen oo wax ka tari kara dib-u-dhiska dalka Soomaaliyeed ee ay baabiiyeen dagaalladu, inkastoo ay Soomaaliya tahay dal midho dhal leh.
June 19, 2012 @ 10:37:30AM
Waxa la joogaa xilligii ay xukuumada iyo alshabaab isa soo horfadhiisan lahaayeen oo ay wada hadli lahaayeen. Qorigu maaha xalka kaliya ee nabad lagu dhalin karo.
June 19, 2012 @ 09:57:58AM
Xubnaha kooxda alshabaab waa inaan loo ogolaanin inay diga rogtaan oo ay isa soo dhiibaan, mar haddii uu haatan jabkoodii cadyahay. Dadkan waxaa la siiyay wakhti ku filan si ay faraha ugala baxaan kooxdaas, laakiin sidaas ma aysan yeelin, ilaa ay arkeen in burburkoodii soo dhawaaday. Dadkan waa in laga jaraa oo laga xisaabshaa waxay dhagaro gaysteen, waana in la horkeenaa maxkamadda dambiyada aduunka ama maxkamad dalka gudihiisa ah. Ciidamada difaaca Kenya waa qaar ciidamada AMISOM u noqonaya awood dheeraad ah oo kusoo biirtay, waxaanan bogaadinaynaa ciidamada Kenya iyo siday kooxda alshabaab sutida ugu qabteen oo ay maska madaxa uga dileen. Markaa hambalyo ayaan leenahay ciidamadeena. Dadka soomaaliyeed waa inaysan u ogolaanin kooxda alshabaab inay diintooda burush wasakhaysan mar mariyaan, haatana nabadii way soo muuqataa.
saadaq abdiasis mohamed
June 19, 2012 @ 09:14:43AM
asc salaan kadib saadaq
June 19, 2012 @ 09:02:07AM
Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu soo celiyo iyaga, oo anagana uu nabad nagu siiyo dalkayaga. Kenya waa daad nabadda jecel, markaa aan ilaahay ka barino inay nabadu waligeed jirtoo joogto.
June 19, 2012 @ 08:42:10AM
Caawinaad waan ka gaysan karaa dagaal, hub hala isiiyo si aan gacan uga gaysto dagaalka loogu jiro in argagixisada dunida laga tirtiro, qori ayaan u baahanahay.
June 19, 2012 @ 07:57:02AM
salaamu calaykum (nabadgalyo korkiina ha ahaato)
June 19, 2012 @ 06:53:47AM
Way u fiicantahay iyaga inay kala jabaan.
WILSON MURITHI-TIGANIA MERU KENYA
June 19, 2012 @ 05:52:47AM
Anigu uma malaynayo in alshabaab ay nabad la rabaan dalka soomaaliya. Alshabaab waxay iska dhigayaan qaar ku jira dagaal diini ah, amaba jihaad. Sideebuuse arrinku sidaa ku noqonkaraa iyado aynu ognahay inay yihiin qaar ku mamay dhiiga bini’aadamka? Ceebi ha ku dhacdo alshabaab. Ilaa 1991, soomaaliya waxay ku jirtay dagaal sokeeye, inkastoo ay soomaalidu boqolkiiba shan iyo sagaashan ay muslim yihiin. Marka su’aashu waxa weeyaan ma jihaad aysan dadka intooda kale garanayn ayay ku jiraan? Laakiin waxa hubaal ah in dad aan waxba galabsan dhiigoodoo la daadiyaa uusan waligii noqonayn jihaad, alashabaabna waa qaar ku mamay dhiiga dad aan waxba galabsan. Dumarka iyo caruurta soomaaliyeed waxay xaq u leeyihiin inay dalkooda ku helaan nabad oo aysan noqonin qaar dalkooda dhexdiisa ku barakacay. Kooxda alshabaab waa inay baaba’daa oo naarta aaddaa.
June 19, 2012 @ 04:30:42AM
Waxaan la yaabanahay koormuu dagaalka lagula jiro kooxda alshabaab noqday mid u dhexeeya muslim iyo kiristaan? Anigu waxaan u haystay inuu yahay dagaalkani mid lagula jiro oo ka dhan ah umul-dooxa iyo ku xadgudubka xuquuda bini’aadamka ee ay kooxdani gaysata, intaasoo ay dheertahay qaraxyaday ka fuliyeen magaalada nayroobi. Miyaysan falalkaas oo dhami dadka rayidka ah u gaysanayn dil iyo waxyeelo. Xitaa usaama bin laadin laftiisu wuu saxsanaa markii uu diiday kooxda alshabaab isagoo u arkayay koox bilaa nidaam ah oo gaangistaro gacan ku dhiiglayaal ah.
June 19, 2012 @ 04:03:23AM
Diiraada aad looma saarin hawsha milatari ee ay Kenya ka gaysatay koonfurta soomaaliya. Istaraatiijiyada iyo xeeladaha milatari ee ay Kenya adeegsataa gabi ahaanba way ka duwan yihiin kuwa ay ugaandha iyo Burundi u adeegsadaan hawlgalladooda military ee ay ka wadaan magaalada muqdisho, hadii si dhex dhexaad ah loo hadlana waxaa la odhan karaa istaraatiijiyada iyo xeeladaha milatari ee ay Kenya waa kuwa horseeday in ciidamada AMISOM si dhakhso ah ugu ruqaansadaan magalaada kismaayo. Waxa kaloo la odhan karaa in kooxda alshabaab hawlgallada ka dhanka ahi ay gaadheen marxalad aan kasoo noqosho lahayn kadib markii ay ciidamada Kenya ay dagaalka kusoo biireen oo ay bilaabeen inay abaaraan oo ay cunaqabateeyaan maleeshiyada istaraatiijiyadohooda iyo dhaqaalohooda ku susgan koonfurta soomaaliya. Taa la’aanteed may suurto gasheen in milatari ahaan iyo siyaasad ahaan loo jabiyo oo looga adkaado kooxda alshabaab. David.
June 19, 2012 @ 03:08:28AM
Inagu mar haddaynu nahay dad Kenya u dhashay oo ilaahay aaminsan, waxaynu ognahay in wixii nabadda u cadaw ah la baabiiyo, sababtoo ah qofkasta oo muumin ahi dal nabada ayuu rabaa. Walaaleheena Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inaan anagu caawin doono inta karaankayaga ah, si aan kooxahaas cadawga ah u cidhib tirno, waxkastana waxaa lagu gaadhi karaa iimaanka.
June 19, 2012 @ 02:20:02AM
Maaha dhab arrinkaasi, wararkanina waa warar la sameeyay. Hadii ay run yihiin, maxay dadku isla bilawgiiba u ogaan waayeen, markii ay kooxda alshabaab ay caddaysay inaysan u diyaar ahayn wax wada hadallo ah oo ay la galaan dadka ay u haystaan inay gaalo yihiin oo ay yihiin cadowgooda ugu wayn, sida maraykanka iyo qaar kaloo badan.
June 18, 2012 @ 09:57:33AM
waxaan rabnaa nabad ka dhalata soomaaliya, si ay ciidamadayadu dalkeena ugu soo noqdaan.
June 18, 2012 @ 06:23:00AM
Waa si wacan oo wanaagsan, anigu qof muslim ah ayaan ahay, laakiin kooxdaasi runtii si wayn ayay noo cabsi galisay, oo xataa anaga laftayada ayaa ka qoomamaysan inaanu dalkan ka dhalanay. Waxaanu ku faraxsanahay in dalkayagu mar labaad lugaha isku taago oo ganacsigu dib u bilaabmo. Waxaanan leeyahay dalkayaga iyo dadkayaga ha la caawiyo. Kenya waa meelaha aan doorbido ee aan ku talada jiro inaan aniga iyo qoyskaygu dagno, waxaanan ugu ducaynayaa inay doorashada soo socota si nabad galyo ah ugu dhamaato oo ay doortaan qof ilaahay ka baqanaaya oo ehlu cibaado ah. Waxaanse anigu odhan karaa in maanta uu raysal wasaare Raila uu yahay ninka ugu wacan, waayo waa qof ka madhan qabyaalada oo arrimaha si toos ah u abaara, una feejigan dalka iyo qaarada afrikaba. Tusaale ahaan Raila xiligii ay jirtay xiisadii Madaxwayne Gbagbo, mawqif adag oo cad ayuu iska taagay arrinkaas, halka ay hogaamiyayaal kale ay ku guuldaraysteen inay mawqif kaa lamida la yimaadaan.
June 18, 2012 @ 04:42:06AM
Dhamaan kuwan alshabaab haloo dilo sidii saddam Hussein. Aamiin.
June 18, 2012 @ 04:20:49AM
Nabad Somaaaliya ka dhalata waa wixi aa ku ducaysanaynay, waayo caruurta soomaaliyeed waa inay ku noolaadaan jawi nabdoon, oo ay iskuulada tagaan, oo ay cibaadada bartaan oo ay meelkasta oo bulshadu leedahay si nabad ah u tagaan iyagoon wax cabsi ah dareemayn. Caruurta ilaahay ayaa xaq u siiyay inay noolaadaan, wax bartaan, caafimaad qabaan, hoy helaan, cibaadaystaan oo ay ka xoroobaan gaajada iyo macaluusha. Ilaahay soomaaliya iyo dadkeeda ha barakeeyo.
June 18, 2012 @ 03:07:35AM
Muxuu yahay waxa ay kooxda alshabaab rabtaa? Aniga waxay ila tahay nabada ayaa dhaanta fidnada iyo dagaalka. Alshabaab waa inay joojiyaan falalkaas oo ay ilaahay xagiisa u jeestaan, hadii kale waa in xad loo yeelaa.
June 18, 2012 @ 02:48:28AM
Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu dadka soomaaliyeed nabad siiyo si ay u dhisaan dalkooda.
June 18, 2012 @ 02:11:05AM
Waxa la joogaa wakhtigii kooxda alshabaab meesha laga saari lahaa, sababtoo ah wakhtigoodii wuu dhamaaday, dadka soomaaliyeedna ma doonayaan dagaal dambe, oo waxay u baahanyihiin nabad iyo inay soomaaliya cusub dhisaan oo aan wax dhiig ah lagu daadin.
JOSHUA WASIKE- KITALE KENYA
June 17, 2012 @ 11:58:37AM
Waan la dhacay horumarka ay ku talaabsadeen ciidamadu, laakiin nimaankaas alshabaab iyo waxaa lagu sheegaa waa in si kama dambays ah loo tirtiraa.
June 17, 2012 @ 11:53:30AM
waxaan aaminsanahay in ay tahay dhamaanteen inaynu isku dayno inaynu wax ka ogaano masiirkeena, qofkasta oo inaga mid ahina waa inuu cadawga ka feejignaadaa, oo uusan jaanis siinin, sababtoo ah hadii ay ku guulaystaan inay soo galaan, waynu ka shalayn doonaa dhamaanteen, oo taasi kuma koobnaan doonto qaar inaga mid ah. Waa inaynu la dagaalanaa.
June 17, 2012 @ 09:51:14AM
dadka soomaaliyeed waa dad aad u wanaagsan, dagaalka ka dhex oogan alshabaab iyo ciidamada AMISOM waa dagaal wacan oo soomaaliya ka dhigaya meel dagan, oo cagaheedaaan ku istaagta, Afrikaanku waa dadka cadhaysan
June 17, 2012 @ 07:03:45AM
Waxaan ilaahay ka baryayaa inuu soomaaliya nabad siiyo. Waxaan aaminsanahay imikaa in hadii ay dadka soomaaliyeed wax u hanqaltaagayaan, in waxaasi nabad yahay. Waxaan qabaa in dadka soomaaliyeed ay si wayn ugu farxi doonaan. Kadib bixitaanka ciidamada difaaca ee Kenya iyo kuwa AMISOM, dadka soomaaliyieed waa inay halgan isdabajoog ah kala hortagaan hadhaaga kooxda jihaadiyiinta alshabaab. Kooxdani waxay aaminsantahay in xukuumada hadda talada haysa ay ka buuxaan dad gaalo ahi, oo ay ilaa dhamaadka dagaal kula jiri doonaan xukuumada.
June 17, 2012 @ 03:57:23AM
Soomaaliya waxaa taariikh ahaan iyo dhaqan ahaanba iska leh dadka soomaaliyeed, cid kastoo nasoo weerarta ama kiristaan isa soo hadoodilay ha ahaato ama cadaw kaleeto ee, waxaan u sheegayaa “meel laguuma hayo”. Ta labaad, hadii aad leedihiin qaar ka mid ah muslimiinta ayaa laynaya dad muslim ah oo aan waxba galabsan, waxaan idiin sheegayaa in maraykanka iyo reer galbeedku oo labaduba guud ahaan kiristaan ahi ay iyaguba wax laayaan, markaa arrinkani waa dabeecad ka mid ah dabeecada bini’aadamka, ilaahayna isagaa ciqaaabi doonaa cidkasta oo disha qof bini’aadam ah oo aan waxba galabsan, sidaasaanuu quraanku dhigayaa.. ugu dambayntii, waxaan dhamaantiin idiinku baaqayaa inaad akhrisataan quraanka, si aad xaqiiqada u aragtaan. Anagu waxaanu aaminsanahay ilaah kaliyaa inuu jiro, ilaahaasoo aan oori iyo ubad midna lahayn, waxaananu sidoo kale aaminsanahay in nabi ciise iyo nabi maxamed iyo dhamaan inta kale ee nabiyada uu soo diray ilaaha wayn ee waxidka ahi. Alle maxay tahay diin aad u qurux badan.
June 17, 2012 @ 03:28:48AM
Xalka kaliyaa waa iyadoo la soo celiyo khilaafadii islaamka.
June 16, 2012 @ 02:04:03PM
June 16, 2012 @ 10:31:51AM
bismi allaah antum ashayaadiin turiiduuna tharawaat al muslimiin wa aqartum min diinihim al xaq waclamuu anakum al waxiidiin khaasiriin wa anna al islaam alladii tuxaaribuunahuu lan yamuut wannakum humul mawtaa fii xayaatihm wasayacuudu bidni rabbii allahuma unsur al islaama wal muslimiin wa adilla ashir
June 16, 2012 @ 09:58:11AM
Ilaahayoow u naxariiso, waayo ma garanayaan waxay samaynayaan wuxuu yahay. Waxaan jecelaan lahaa inay toobad keenaan imika, ilaahayna wuu u dambi dhaafi doonaa, haddii kale……………….waxaan ugu baaqayaa inay marlabaad ka fikiraan waxay wadaan masaxsanyahay mise ma saxsana – waxaaso ah laynta ay laynayaan dadk aan waxba galabsan oo iyaga la mid ah!!
June 16, 2012 @ 09:56:12AM
Arrinkani waa arrin tiiraanyo leh marka la arko dad soomaaliyeed oo muslim ah oo ku farxa oo dabaal daga marka kooxda alshabaab ay daadiyaan dhiiga dad waxba galabsan oo sabol ah oo dumar iyo caruur soomaaliyeedba leh. Sideebaad ugu farxi kartaan markaad aragtaan iyadoo masiibo iyo shark ku habsaday dadkiinii, walaalihiin, hooyooyinkiin iyo aabayaashiin, oo ay alshabaab waxaa u gaysato, iyagoo magaca diinta ku hadlaya? Ilaahay miyuu jecelyahay inuu arko dadka soomaaliyeed oohintooda? Waa ciddee cidda dhab ahaantii isku sheegi karta inay soomaali ku abtirsato, iyagoo islamarkaana ku farxaya baroorta iyo murugada dadkooda? Waxaan kaloo u sheegayaa dadka soomaaliyeed ee taageersan kooxda alqaacida iyo alshabaab dagaalka ay ugu jiraan inay dunida gacanta ku dhigaan, waxaan waydiinayaa dadkaasi, miyaysan ka wacnayn kana sharaf badnayn in lala dagaalamo oo la xakameeyo saboolnimada iyo jahliga burburiyay dadkiinii? Sidoo kale, waxaan jecelahay inaan idin waydiiyo, sideebaad u maamuli kartaan dunida oo dhan, iyadoo dumarkiina iyo caruurtiinu ay gaaajo ku seexdaan? Dhanka kale, waxaan leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed ee ay marin habaabiyeen dad ka da’ wayn oo kula taliyay inay taageeraan kooxda alshabaab oo ay burburiyaan dalkooda, waxaan dhalinyaradaa waydiinayaa miyaydaan ogayn inaad tihiin mustaqbalka soomaaliya? Dadka waawayn wakhtigoodu waa tagay, mustaqbalkooduna waa dhamaaday, laakiin idinka mustaqbalkiinu waa idin sugayaa. Waxaad tihiin qaar ilaahay u doortay inay qarankan u hogaamiyaan mustaqbal wacan. Mise waxaad rabtaan dhalinyarada soomaaliyeedoow inaad wali sanado kale ku lumisaan dagaal iyo dumarkiina oo aad maryaha ka furataan, halka dhalinyarada kale ee afrika ay hogaaminayaan dalalkood oo ay rabaan inay gaadhsiiyaan casriga tiknoolojiyada, isla markaana ay abuurayaan barnaamijyo kombuutarka ah oo aan hore loo arag? Hadaad haa ku jawaabtaan, isku xishooda, waad ceebeysantihiine.
June 16, 2012 @ 09:08:17AM
tababarkani waa mid wacan laakiin kaliya waxan rabaa inaan u digo ciidamada marin habaabinaya dhalinyarada yabaalsan ee quusta jooga ee gobolka gaarisa ku nool, waa sida ay sheegeen dad ku nool gobolkuye, halkaasoo ay sheegeen in cidamadaasi dhalinyarada ugu baaqayaan inay kusoo biiraan. Markaa waxaan nimankaas u sheegayaa inay si dhakhso ah u joojiyaan waxay wadaan oo ay shaqadooda sidii la rabay u gutaan. Shaqo wacan ayaad wadaan waxaanan idin la garab taaganahay duco, cidamada.
June 16, 2012 @ 08:24:44AM
Ilaahayoow nabad sii dadkan.
June 16, 2012 @ 07:51:28AM
maqaalkan waxaa qoray dad munaafiqiin ah.
June 16, 2012 @ 07:33:31AM
Alshabaab iyadaa sababtay waxa silic ee soomaaliya ka jira, laakiin meelaha ay xukumaan qaar ka mid ahi runtii nabad baa ka jirta. Way caddahay in soomaaliya xalkeeda uusan ku jirin diinta kiristaanka, sida dadka qaar kor ku xuseen oo soo jeediyeen. Sababtoo ah qaar ka mid ah dalalka ay dadka intooda badani kiristaanka yihiin cadho alle ayaa ku habsatay, taasoo qaabka ay cadhadaasi ku timid uu ka mid yahay xanuunka aydhiska iyo khamriya-cabnimada oo ku batay dalalkaas. Run ahaantii islaamku waa habka nololeed ee ugu wacan, haddii eebe idmona waxaan rajaynaynaa oo aan ilaahay ka baryaynaa in maalin uun ay dalalka afrikaanka ahi dhamaan ay islaam noqon doonaan!!
Nguvumali Said Kombo.
June 15, 2012 @ 09:57:47AM
Anigu waxaan aaminsanahay in kooxdan uu dhamaadkoodii yimid, waxaanan qabaa in aynu joogno xiligii ay kooxda alshabaab ay ka shaqayn lahayd danta dadka mandaqadda ku nool. Alshabaab way inagu xadgudbeen, waxaanay dhulka jiid-jiideen diinteena islaamka ah, iyagoo ku andacoonaya inay diinta islaamka u dagaalamayaan, adeegsanaayana habab si xeeldheer u wasakhaysan. Waxaase dhab ah in cadaaladu jiri doonto oo joogi doonto, cadaaladuna iyadaa nafteeda difaacda.
June 15, 2012 @ 08:30:26AM
Ciddii reer Kenya ah ee lagu helo inay ka mid tahay kooxda alshabaab waxay dhabarka u ridan doontaa cawaaqibka arrinkaasi leeyahay, intay dadkooda reer Kenya ka caawin lahaayeen la dagaalanka kooxda alshabaab iyo ka tirtirida kooxdan laga tirtirayo Kenya iyo dunidaba. Anigu waxaan taageersanahay ciidamadeena amaanka ee Kenya, waxaan ugu ducaynayaa mar kasta in ilaahay goor kasta u gargaraaro.
June 15, 2012 @ 08:09:59AM
Alshabaab waa dad xadhko-goostay oo shayaadiin ah, kuwaasoo baabiinaya oo dilaya dad aan waxba galabsan. Ilaahay ha idin hago si aad u baabiisaan, sababtoo ah waxaad difaacaysaan cadaalada, iyaguna waxay ku xadgudbayaan xaqa ay dadku u leeyihiin inay noolaadaan – waa anigoo ah JONATHAN RWEYEMAMU - BUKOBA. June 15, 2012.
June 15, 2012 @ 07:53:41AM
boqolkiiba boqol waa is wacan
June 15, 2012 @ 07:27:55AM
Waxaan rajaynayaa in ciidamadu ay shaqo wacan qabteen ........... waxaanan leeyahay aan ka faa’idaysanno kala qaybsanaantooda, oo aan tirtirno. Ciidamada Kenya halkaa ka wada.
June 15, 2012 @ 07:10:26AM
daka soomaaliyeed ma ixtiraamaan nafohooda. Waxaan odhan karaa qadarin uma hayaan mana ixtiraamaan xaqa uu qofku inuu noolaado u leeyahay. Markaa xabad ha iskala hor yimaadaan.
June 15, 2012 @ 06:30:51AM
Anaga (hadaan Kenya nahay) waan kala dhamaanay kooxda alshabaab, ilaa horjoogohooda ugu dambeeya meel fagaare ah qudha looga jaro.
June 15, 2012 @ 06:09:41AM
Kooxda alshabaab ee soomaaliya waa inay caawa-dhacdaa, si kastaba arrinkaasi ha ku yimaadee. Gabashada ay magaca ilaahay ku gabanayaan iyo sheegashada ay sheeganayaan inay jihad ku jiraan maaha sabab dagaal loo galo oo loo geeriyoodo. Waxaan dareensanahay in dhalinyaradan lagu gurayo oo ay ka faa’idaysanayaan rag maalqabeen ah oo raba inay maal uruursadaan dhalinyaradaasina ay dhintaan, halkay ragaasi noloshooda ka hagaajin lahaayeen ama ay gacan qabasho ugu fidin lahaayeen oo ay ka dayn lahaayeen dagaalka ay u dirayaan. Kooxda alshabaab waa inay libdhdaan, ma jiro wax ku kallifaya inay sidii xoolaha u dhaqmaan oo ay kaymaha ku noolaadaan, dadka aan waxba galabsanna ay ugaadhsadaan. Anigu ma garanaayo, laakiin waxaan si xoogleh u dareensanahay in dadka maalqabeenka ah ee ka dambeeya ama soo diraya dhalinyaradan raga iyo dumarkaba leh ee faraha madhan, in ilaahay ciqaabi doono, waxaan kaloo aaminsanahay inaysan waligood indhaha saari doonin midhaha jannada ee ay markasta ku andacoodaan inay heli doonaan. Ilaahay ha ii dambi dhaafo.
June 15, 2012 @ 04:42:35AM
Raali ha la iga ahaado, laakiin waxaan dareensanahay in waxyaabaha quraanka ku soo arooray qaarkood aysan dhaleecaynin falalka bahalnimada ah, amaba way dhiirigaliyaan la imaansha falalkaas. Sababta aan sidaa u leeyahay waxa weeyaan dhamaan kooxaha aad ka warqabtaan ee dunida ka jira ee dadka laaya iyagoo adeegsanaya argagixisada, qaraxyada ismiidaaminta ah, iyo wixii la mid ah, dhamaan kooxahaasi waa islaam. Tusaale kale hadaan bixiyo, Zanzibaar waxaa ka jira kala-sooc diimeed oo aan kala go’ lahayn, waxaana intaa la gubaa kaniisado aysan shaqo ku lahyn dadka wax gubayaa! Markaa way igu adag tahay inaan fahmo sababta keentay in diintu aysan dhaleecaynin arrimahaas, ta ugu daranina waxa weeyaan kooxahani way qirsanyihiin inay falal-dhagareedyadaas ay iyagu gaystaan. Anigu sidaan ogahay, ilaahay inoomuu fasixin inaynu wax dilno, xitaa haddii aad la inoo cadaadsho oo xaqeena la ina duudsho, waxaan rajaynayaa in dadka muslimka ah ee halkan joogaa ay arrinkaa iga jaahil saaraan, si aan dhan isaga leexiyo waxyaabaha aan wanaagsanayn ee aan ka aaminsanahay diintiina, gaar ahaan arrimaha la xidhiidha falalka gacan-kahadalka iyo dadka layntooda.
June 15, 2012 @ 04:33:13AM
Wax qarsoon maaha in kooxda alshabaab ay tahay inay is habeeyaan oo ay la yimaadaan hab cusub oo ay dalka kula wareegaan!!!....
June 15, 2012 @ 03:15:26AM
Anaga aad ayaan u faraxsannahay, markaa aan bilawno dibudhiska soomaaliya, oo aan ka dhigno dal ilbaxnimo gaadhay oo lagu noolaan karo. Aan afrika ka dhigno meel wacan oo lagu noolaan karo, waxaanan hambalyaynayaa walaalahayga, aqbalaadda ay waxoodhan aqbaleen. Waw.
June 15, 2012 @ 02:55:02AM
Waxaan waa uun dacaayad reer galbeedku wadaan. Waxaan idin leeyahay baadhitaan sameeya, waayo SOOMAALIYA GABIGEEDUBA WAA WADA MASHAAKIL saaxiibadayoow.
June 15, 2012 @ 02:44:40AM
Nabad soomaaliya ka dhalataa waa nabad Kenya ka dhalatay, aniguna waxaan taageersanahay ciidamada difaaca Kenya, anigoo ku taageersaan hawlgalkooda ay ugu jiraan inay soomaaliya ku soo ceeliyaan sharciga iyo kala dambaynta. Kenya iyo AMISOM waa inay dadka soomaaliyeed xoreeyaan oo ay ka caawiyaan sidii ay u dhisi lahaayeen xukuumad sharciyad haysata. Dadka afrikaanka ahna waxaa ku waajib ah inay muruqooda isu keenaan oo si mug u hawlgalaan, si nabad looga dhalin lahaa qaaradan qurxoon ee qaniga ah. Ilaahay ha barakeeyo.
June 15, 2012 @ 01:46:43AM
Waa riyo rumoowday, laakiin ciidamada xukuumadu waxay ku kacaan kufsi iyo boob ay u gaystaan xoolaha muwaadin kastoo soomaaliyeed leeyahay, markaa sideebaa loo cidhib jari karaa alshabaab? Waa anigoo ah moha
June 15, 2012 @ 01:25:02AM
Xitaa ilaahay ma jecla inuu arko dad aan waxba galabsan oo dhiigooda sabab la’aan loo daadinaayo.
June 14, 2012 @ 10:41:21PM
anigu shaqsi ahaan waxaan qabaa in alshabaab aysan waligeed ogsoonaanin wanaaga ay leedahay in dal nabdoon lagu noolaado. Soomaaliya waa qaran wax wanaagsani kasoo bixi karaan, waana qaran ay ahayd inuu afrika inteeda kale waddo u noqdo, hadii nabadi ka jiri lahayd. Soomaaliya waxay kulaalaysaa badda cas iyo badwaynta hindiya, waxaanay noqon karaysaa xeeb muhiim ah oo ay kusoo xidhaan ganacsiga qaarada afrika u socdaa. Anigu waxaan la jiraa soomaalida intooda yar ee dhugan karta ama fahmi karta micnaha ay ku fadhido midnimadu. Laakiin waxaan hubaa in maalin uun ay nabadi dhalandoonto alshabaab ama haysa soo dhiibto ama yaysan isa soo dhiibinee.
June 14, 2012 @ 05:59:48PM
Xidigtii kooxda alshabaab ee bidhaamaysay haatan waxay noqotay mugdi, waxaana la joogaa xiligii aan ku dhawaaqi lahayn oo dhihi lahayn in inagu filan aragnay falalka bahalnimada, waxshinimada iyo arxan darrada wata ee kooxda alshabaab kasoo fula. Dhab ahaantii waxaan qadarin u haynaa sida dalalka afirkaanka ah qaarkood ay si kash iyo lab ah gacan uga gaysteen soo celinta nabada iyo daganaanshaha soomaaliya lagu soo celinayo. Soomaaliya waxay dalalkaas galin doontaa kaydkeeda wadaniga.
June 14, 2012 @ 03:34:35PM
Soomaaliya waxay u baahantahay naxariis xaga samada ka timaada."U naxriiso sida aabahaa uu kuugu naxariisto" Anagu maaha kaliya inaan naxariista eebe helno, laakiin sidoo kale waa inaan u adeegsanaa in aan dadka kale ugu naxariisanno, anagoo adeegsanayna ficil, hadal iyo ducadeena. Hadii si kale loo dhigo, waxa inagu waajib ah inaynu ku dhaqano isu naxariisashada jidh ahaan iyo ruux ahaanba. Ilaahayna inaynu sidaa yeelno oo acmaashaa la nimaadno ayuu inaga rabaa, sababtoo ah diin kastaa, xitaa ta ugu quwada badan diimuhu, macno yeelan mayso hadii aysan farayn in dadku acmaal la yimaadaan, kuwaasoo isu naxariisashadu ka mid tahay. Markaa maxay yihiin noocyada ama acmaasha isu naxariisashadu?
Waa qaar jidh ahaaneed, sida • quudi cida gaajaysan • cabitaan sii cidda ooman • hu’ (maryo, calal) u fidi cidda qaawan • hoy u fidi cidda hoyla’ • daryeel maxaabiista • booqo cidda bukaanka ah • aas cidda dhimatay• jaahilka waxbar • cida nool iyo ta dhimatayba u ducee • gafka laguu gafay dhaaf adigoo sidaa ku niyadsan. Ilaahay si dhaqso ah ayuu u badbaadin doonaa soomaaliya, si aan la filayn. Ciidamada waxaa ku waajib ah inay ku dhaqmaan naxariista qaybeheeda intay ku gudo jiraan gudashada waajibaadkoodu ku aadaan caawinta dadka soomaaliyeed ee aan waxba galabsan.
June 14, 2012 @ 12:26:34PM
Waa arrin aad u wanaagsan
June 14, 2012 @ 11:26:17AM
Shaqo wacan weeyaan ciidamadeena ka hortaga aad ka hortagteen kooxda alshabaab! Kooxaha ay ka midka yihiin alshabaab, alqaacida, boko xaraam iyo kuwa uamsho ee Zanzibar ka jiraa waa shaydaan marooleyaal, waxaanay adeegsadaan dad calooshood u shaqaystayaal ah, oo maskax qafilan, nabadda neceb, qaska iyo qalaanqalka u heegan ah, bini’aadamka burburkiisa ka shaqeeya! Anigu waxaan ahay kiristaan, laakiin asal ahaan waxaan kasoo jeedaa muslim! Waxaanan leeyahay ehel iyo asxaab badan oo muslimiin ah oo aad u wacan, laakiin isma shabahaan iyaga iyo dadkan dhiiga u ooman ee diinta islaamka adeegsanaya ee gabood uga dhiganaya waxyaabaha ay rabaan ee kharriban iyo rabitaankooda ay rabaan inay arkaan dhiig daata! Waxaan leeyahay hoog ha u sugnaado! Ilaahay wuu arkaa oo wuu maqlaa dhagarohooda! Laakiin iyagu waxay jecel yihiin shaydaanka, laakiin ilaahay waa mid, dadkiisana wuu u naxariis badan iyo cadaalad badanyahay! Markaa waa inay arkaan khatarta ay khaatumadoodii geliyeen! Waxaan ugu baaqayaa damiir yeesha walaalayaal oo u dhag nuglaada baaqyada nabadeed ee afrika iyo dunida inteeda kale kasoo yeedhaya! Nabadeey!
June 14, 2012 @ 10:29:43AM
Waxan rajaynayaa in dadkaasi ay nabad helaan markay faraha kala baxaan weerarada fulaynimada iyo waxshinimada leh.
June 14, 2012 @ 10:18:58AM
Burburka kooxdani waa faa’ido balaadhan, sababtoo ah wuxuu ka hortagi doonaa inay kooxahan oo kale ay dalalkeena ka abuurmaan, iyagoo kooxdan gacan-qabasho ka helaaya.
June 14, 2012 @ 08:43:22AM
Shaqo wacan ciidamada AMISOM
June 14, 2012 @ 08:41:15AM
maanta soomaaliya waxay u baahantahay nabad iyo daganaansho iyo horumar, waayo anagu waanu ka daalay fawdada. Waxaan ka dalbanaynaa maraykanka iyo xulufadiisu inay caawiyaan soomaaliya iyo Somaliland dhaqaale ahaan, oo aysan ku koobnaan jabinta iyo ka adkaanta kooxda alshabaab, waayo waxaanu u baahanahay khidado istaraatiiji ah.
June 14, 2012 @ 07:53:41AM
Alshabaab waxay u dil-dilaacaysaa sidii dhari gaboobay! Wasaqiinta dhamaan!
June 14, 2012 @ 07:44:11AM
Waxaan rajaynayaa inay nabadi ka dhalato geeska afrika, GAAR AHAAN SOOMAALIYA. Dan.
June 14, 2012 @ 07:27:46AM
Ilaahay ugu dambaynta wuu maqli doonaa dadka soomaaliyeed, waxaana soomaaliya ka dhalan doonta nabad, oo waxay la mid noqon doontaa dalalka kale ee nabada ah.
June 14, 2012 @ 05:56:12AM
Waxaan amaan usoo jeedinayaa ciidamada AMISOM iyo kuwa soomaaliyeed, shaqada ay qabteen awgeed, waxaanan u malaynayaa in dadaalka ay wadaan ay dadka soomaaliiyeed kaga nabadgali doonaan mugdiga dheer.
June 14, 2012 @ 05:09:08AM
Alshabaab waa kooxda ugu wanaagsan kooxaha islaamiyiinta, waxaanay qaateen go’aan wacan oo waxay awoodaan inay ka adkaadaan cadawga islaamka, cadawga islaamkuna waa yurub iyo maraykan.
June 14, 2012 @ 05:04:00AM
Waxaan u dhalannay inaynu ilaahay caabudno, ee ma aahan inaynu dagaalano.
June 14, 2012 @ 05:02:30AM
Ciidankeena waa inuu burburiyaa kaamamka soomaalidu ku noolyihiin si looga joojiyo inay dadkani soo galaan dalkeena.
June 14, 2012 @ 04:25:29AM
Wax kasta oo aad samayso dunidan, ama ha xumaado ama ha samaadee, waa inaad ogaataa in ilaahay uu kaa xisaabin doono. Markaa kooxda alshabaab miyaad ilaahiina idin abuurtay ka baqataan? Waayo ilaahay awoodiisa ayuu xiligu doono idinku baabiin doonaa. Maad nabada ka talisaan oo aad la timaadaan kalgacayl uu midkiinba midka kale uu jecelyahay, sida uu ilaahay u jecel yahay dunidan. Waxaad ogaataan in dhiig kasta oo aad daadisaan aydaan aduunkan ka dhimanayn illaa la idika ciqaab mariyo oo la idinka aargoosto.
Lawrence Ndungu Geita Tanzania
June 14, 2012 @ 03:39:20AM
Ciidamada difaaca Kenya iyo kuwa AMISOM shaqo wacan ayay qabteen, waxaanay mutaysteen in la siiyo abaalmarinto ugu wcan. Waxaan soo jeedinayaa inaan u ducayno si ay u gaadhaan meesha hadhay, si aan anaguna ugu dabaal dagno markaas in soomaaliya noqotay dalalka geeska afrika ee nabada ah mid la mid ah. Socda, ocda, Socda AMISOM iyo Ciidamada difaaca Kenya.
SALIM SEMVUA MSANGI
June 14, 2012 @ 02:59:56AM
Anigu waxaan ahay qof muslim ah, markaa in la dhaho dagaalkani waa dagaal diimeed waxaan u arkaa in ra’yigaasi uu yahay mid maskax qufulan kasoo fulay, oo fahankeeda islaamku uu gaaban yahay. Sideebaa loo dhihi karaa arrinkaas, waayo waxaad laynaysaan kumanaan kun oo walaalihiina islaamka ka mida? Waxaana aad sidoo kale layseen dadka kale ee aaminsan diimaha kaleeto, kuwaasoo aan waxba galabsan. Waxaad horseedeen in kumanaan kun oo soomaali ah, gaar ahaan dumarka iyo caruurtu inay macaluul iyo xanuun ay la dhibaataysnaadaan. Jihaadku maaha macnihiisu kaliya inaad dagaal la gasho dadkaan muslimka ahayn, laakiin macnaha dhabta ah ee jihad waxa weeyaan dadaal adag oo qofku wax u dadaalo, sida nolol maalmeedkiisa, waxbarashadiisa iyo diintiisa. Marka quraanku leeyahay “hadaad aragtaan qof gaal ah dila”, taa macneheedu waa marka gaalada la yidhi nabad ha inaga dhaxayso oo ay arrinkaa diidaan, sidaa awgeed ayuu ilaahay amar ku bixiyay in la laayo cadawga hadii ay dagaal bilaabaan. Arrinkani wuxuu ku koobanyahay kali cidii cadawga ka mid ah ee dagaal hurisa, sababtoo ah cidda aayadani kusoo aroortay waa cadaw diiday in nabad la gaadho kadibna dagaal bilaabay, sidaa awgeed ayuu quraanku dhigayaa in hadii uu cadawgiinu isu kiin soo dhiibo, maaha kaliya inaad sii daysaan, ee waa inaad cid ku dartaan ilaa inta uu ka gaadhayo meel amaan ah. Taa macneheedu maaha inuusan jirin jihad diini ahi, laakiin waxa kaliya ee jihaadkaa la gali karaa marka diinta ilaahay dagaal lagala horyimaado. Su’aashu waxa weeye, hadii dhab loo hadlayo, ma dawbaa in la cadaadiyo dumar, caruur iyo duqayti ilaa xadkaas? Xitaa waxaad layseen kuwii iyagu go’aansaday inay magangalyo iyo hoy u fidiyaan dadka idinka soo cararay idinka iyo dagaaladiina bilaa micnaha ah. Ma waxaad garateen inaad ka daba tagtaan oo aad laysaan!!!? Arrinkani waa waali cad, markaa waa inaad joojisaan diinta islaamka waxyeelada aad u gaysanaysaan. Waxaan idin ogaysiinayaa: diinta islaamka yaan loo aanayn falalka ay ku kacayaan dad tiro yari, balse ha la eego wuxu quraanku sheegayo.
June 14, 2012 @ 01:53:13AM
Alshabaab oo ah koox argagixiso ah, waxay waday inay dalalka jaarka ah qal qal ka rido, oo dawlado kale oo afrikaan ah ku faafiso dhagarqabayaal. Sababta ay dambiyada u galayaan ma ahan biyo raadin, ee waa arimo diinta salka ku haya. Waxaan dhamaanteen usoo joognay in iska horimaadyada diimeed ay huriyaan khilaaf iyo isku dhac dadka soo kala dhex gala. Inkastoo a soomaaliya leedahay fikrad diimeed oo go’doonsan, laakiin way baahday waxaanay isu badashay dhibaatoyin dhaqan-dhaqaale, halkaasoo cidda ugu dhibta badani ay tahay dumarka iyo caruurta. Dadka soomaaliyeed waa inay fahmaan inaysan xal ahayn in muddo dheer dagaal lagu jiraa, oo aysan sidaas ku xalismayaan dhibaatooyinkoodu, waana inay fahmaan in dadka la abaabulo si ay ugu kala biiraan fikrado kala qaybsan. Waxaan soo dhawaynayaa inay ciidamada Afrika kooxdan cidhibtiraan. Hadii kooxdani meesha ka baxdo, waxay dadka soomaaliyed awood u heli doonaan inay u gogol-xaadhaan horumarka qoysaskooda iyo ka dalkooda. Ilaahay ha barakeeyo afrika.
June 13, 2012 @ 01:50:57PM
Waxay ila tahay alshabaab lama jabin.
June 13, 2012 @ 11:53:36AM
June 13, 2012 @ 10:29:37AM
Waxaan u malaynayaa waxa haatan taagan wakhtigii la xisaabin lahaa, 40kii maalmood ee loo qabtayna waa dhamaatay
June 13, 2012 @ 09:54:21AM
Marka si daacad ah loo hadlo, waxa la joogaa haatan wakhtigii soomaaliya nabad laga dhalin lahaa, nabaduna waxay ka bilaabmaysaa xubnaha kooxda alshabaab laftooda, ilaaha wayn waxaan ka baryaynaa in nabadu jirto oo joogto.
June 13, 2012 @ 06:58:34AM
Wada jirka way ku awood badanyihiin, kala jabkuna way ku guul-darraeystaan! Markaa way fududahay in si adag loo weeraro!!!!!!!!!!
June 13, 2012 @ 06:20:53AM
Xadaarad kasta oo aduunka ka jirtaa waxay leedahay waqti, laakiin islaamku waligii ma uusan dhimanin, si dhakhso ahna waanu usoo laaban doonaa.
June 13, 2012 @ 04:46:14AM
Si soomaaliya nabad looga helo, iyo si loosoo afjaro dhibaatada ay soo mareen dadka soomaaliyeed, waxa haatan kooxda alshabaab u banaan fursad qaali ah, oo ay faraha kagala bixi karaan dagaalka, gacmahana is qabsan karaan iyaga iyo muwaadiniinta nabada jecel, si ay kadibna qarankooda u dhisaan.
June 13, 2012 @ 03:53:30AM
Dadka soomaaliyeedoow miyaad u malaynaysaan inuu idinka saari doono dhibaatooyinkiina cid aan ahayn ilaahii idin abuuray? Hadii aydaan rabin fawdo, miyaan taa macneheedu ahayn inaad nabad doon tihiin? Markaa hadda waa inaad u hogaansamtaan ilaahay ood garataan nabadgalyada gacantiisa ku jirta, si aad nabadgalyadaas u heshaan. Xitaa haddii aysan cid waliba sidaa yeelin, oo ay dad tiro yari ay ilaahay u hogaansamaan, dadkaasi markay tukadaan ee ay ilaahay u khushuucaan ayaad intiina kalena badbaadi doontaan.
June 13, 2012 @ 03:41:15AM
Hadii midkiinba midka kale uusan jeclaanin, xageebaad nabad ka heli kartaan, soomaaliya waxaan leeyahay ilaahay usoo noqda, sababtoo ah isagaa soomaaliya idiinka aqoon roon. Cidina wax nabad ah idiinma keeni karto, ee ilaahay ayuumbaa idiin keeni kara, ama rumaysta ama ha rumaysanina, Runtu waa run.
June 13, 2012 @ 03:15:07AM
Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaaliyo oo xafido dadka soomaaliyeed, oo uu soomaaliya ka dhigo dal nabad ah. Ilaahay taladiisu ha ka fusho soomaaliya. Hambalyo Amisom iyo ciidamada difaaca Kenya, shaqada wacan ee ay qabteen awgeed.
June 13, 2012 @ 02:32:37AM
is-aaminidda, daacadnimada iyo wadaninimadu waa arrimo aad muhiim u ah. Soomaalidu waxay dhaqan u leeyihiin in qofku iska dhigo mid wax walba garanaaya, dhaqankaasaana noloshii adkeeyay. Dalal badan ayaa dhibaatooyin soo mareen, laakiin way ka gudbeen dhibaatooyinkaas, maanay yeelin sida walaaleheena soomaaliyeed. Cidkastaa hogaanka ma qaban karto. Hambalyo Amisom.
June 13, 2012 @ 01:10:59AM
Ilaahayoow waanu ku mahadinaynaa maalinkastana waxaanu u ducaynaynaa jaarkayaga Soomaaliyeed ee aanu jecelnahay. Hadda waxay u muuqataa in dhibtadoodu ay tahay mid sii dhamaanaysa oo wax tagay noqonaysa. Ilaahayoow adigu caynaanka noo qabo, aamiin.
June 13, 2012 @ 12:54:04AM
Ma waxay sidaa u samaynayaan dareenka ay haatan dareensanyihiin in ay ciidamada dawladda iyo xulufadoodu ay ka awood roonaadeen, mise waxay ka tahay dib-ugurasho dagaal? Dadka Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan ee ay maleeshiyooyinkani laayeen wuxu dhiiggoodii daatay u ooyayaa cadaalad. Markaa waa in kooxahan laga xisaabiyaa xad-gudubyadii ay u gaysteen shacabkooda, iyo waliba burburka ay u gaysteen dhaqaalaha Soomaaliyeed. Nairobi, Kenya.
Ming'ati Olole Manto
June 12, 2012 @ 07:09:20PM
Ilaahay Soomaaliya ha caawiyo
June 12, 2012 @ 06:19:40PM
Halkaa ka haya dagaalyahannada kooxda alshabaab, waana inaad la dagaalantaan cadawgeena raba inay waxyeeleeyaan diinteena Islaamka ah, gaar ahaan ah dawladaha reer galbeedka ah ee reer yurub, oo waxay isku dayayaan in ay balaadhiyaan dacaayadda ka dhanka ah dalalka muslimka ah iyo dhammaan muslimiinta oo dhan, markaa haddaynu nahay dad muslim ah, waa inaynu isu nimaadnaa si aynu ula dagaallano cadawgeena, waxaanan leeyahay Alshabaab waligeed is dhiibi mayso.
June 12, 2012 @ 12:41:55PM
Waa in markasta si cad loo sheegaa in dadka layntooda iyo u caga-juglayntoodu ay tahay caado kasoo aroortay shaydaanka iyo shaqaalihiisa. Qofkasta oo aan jeclayn nabada waxa ku jirta gacan shaydaan, waayo ilaahay sinnaba raali ugama noqdo daadinta dhiiga haba yaraatee. Anigu ma rumaysan karo in dadka wax laaya, ee gaar ahaan caruurta, iyo dumarka itaalka daran iyo dadka duqoobay inay yihiin qaar u dagaalamaya ilaah naxariis badan, se laakiin waxay u dagaalamayaan shaydaan dhiigya-cab ah. Dadkani waxay iska dhigayaan qaar ku hadlaya magaca ilaayay, si ay ugu suurtowdo inay idin khiyaameeyaan idinkoon ogayn, oo ay idinka hor istaagaan inaad xaqa iyo baadilka kala garataan. Ilaahay dadkiisa wuu jecelyahay, laakiin shaydaanku waa gacan-ku-dhiigle tuug ah. Aduunkoo dhamina wuu kasoo horjeedaa kooxahan fallaagada ah. Marka waxaan leeyahay gacan-ku-dhiiglayaalyohow tuugta ah, ee beenlaawayaasha ahi waa inaad isa soo dhiibtaan, waayo waxaa yimid xiligii ciqaabta. Arrinka la yaabka lihi waxa weeyaan ilaaha aad sheeganaysaan in aad daafacaysaan muxuu idiinka dulqaadi waayay jabka aad jabteen? joojiya been abuurasahada aad illahay ku haysaan oo wax awood ah aan idiin siinin. Joojiya dagaalkan aan faa'idada leheen.
June 12, 2012 @ 12:15:59PM
Aniguu waan ogaa inay burburi doonaan muddo ka dib, sababtoo ah waxay raaceen dariiq mugdi ah, inaguna waxaan raacnay dariiqa nuurka. Markaa ha dhadhamiyeen xanuunka ay dadka kale u gaysteen, hambalyo ciidamada difaaca Kenya iyo xulufadooda shaqada wacan ee ay qabteen awgeed.
Nalianya Wasike- Kisii Kenya
June 12, 2012 @ 11:12:58AM
Kooxda alshabaab kala jabka ay kala jabeen waa dhamaadkoodii, waxaana arrinkaasi summadayn doonaa soomaaliya cusub. Arrinkani waa war wacan, waa dib u dhiska dalku wuxuu suuroobi karaa kaliya marka la helo nabad iyo daganaansho. Xitaa kuwa isa soo dhiiba waa in laga xisaabiyaa dunuubta ay ka galeen bini’aadamka.
June 12, 2012 @ 10:53:57AM
Alshabaab maaha bini’aadam, markaa waa in la tiritiraa – anigoo ah NZAU JOSEPH – mwea
June 12, 2012 @ 10:32:42AM
halagu soo dhaweeyo dawlada cusub, laakiin waa in dadka soomaaliyeed ay doortaan, hadii cidla lagaga tago dadkan oo loo yeedhi waayo waxa degenaansho la’aan ku dhici doonta soomaaliya oo markeeda horeba nabad la’aan ku jirtay. Sababta kale ee ay tahay in loo yeedho dadkani waxa weeyaan waxay taageero ka haystaan qaar ka mid ah shacabka iyo qabaa’ilka qaarkood. Markaa ha la saamaxo si dadka soomaaliyeed u helaan nabad, waxaanan rabnaan inaan ka ganacsano inta u dhaxaysa Mogadishu, Kisimayu, ras qamboni. dhobly iwm.
June 12, 2012 @ 09:48:58AM
Hambalyo ayaan u dirayaa ciidamada AMISOM. Dalalka haatan aduunka ka jiraa waxay u baahan yihiin inay nabad helaan si ay horumar u gaadhaan oo ay dhaqaalohooda u dajiyaan, gaar ahaan dawladaha dunida sadexaad ah sida soomaaliya, markaa kooxda alshabaab waa in la cidhib tiraa, si loogu gogol xaadho horumar dhaqaale oo ay soomaaliya gaadho. Waxaan leeyahay aan gacmaha is qabsano oo aan u ducayno inay guulaystaan ciidamada ka qaybqaadanaya cidhib tirka kooxda alshabaab laga cidhib tirayo dalka soomaaliya. WOW
June 12, 2012 @ 09:16:49AM
Waxay ila tahay nimankani ismalaha qiyaameeya dadkeena, majiro hab aan ula socono argagixisada.
June 12, 2012 @ 08:54:18AM
Waa inaan dhiig dambe lagu daadin soomaaliye iyo wadamada kale ee afrika. Waxaan leeyahay aynu qoryaha iyo hubka iska dhigno oo bal aan nabada tijaabino, waayo nabadu waa xalka kaliiya ee ay dalalka afrika ku gaadhi karaan horumarka. Dhamaanteen hore ayeynu usoo aragnay dagaalo ka dhacay dalalka afrika, markaa dagaalku xal uma aha mashaakilka dalalkeena horyaala.
June 12, 2012 @ 08:15:46AM
Kooxda alshabaab waa in la dabar-gooyaa wax kasta arrinkaasi ha kallifee. Waa inaan innaba loo naxariisan haba yaraatee.
witty steve nyatuga
June 12, 2012 @ 07:43:21AM
Kooxda alshabaab waa in gabi ahaanba la tir-tiraa, waayo annagu waxaan rabnaa in soomaaliya ay noqoto meel nabada oo lamid ah dalalka dariska, si aan nabad caga adag ku taagan u helno.
June 12, 2012 @ 06:01:52AM
dadkan waa in la laayaa, Kenya iyaduna waa mahadsantahay, kooxahani waxay mutaysteen inay dhintaan. Gacan ku dhiiglayaasha meel ugama banaanaana dunidan, waxaanan leeyahay ciidamada AMISOM hawsha wada oo badwaynta ku dara kooxahan, si aan marlabaad loo arag. Aamiin.
peter k kagiri
June 12, 2012 @ 05:49:08AM
dadka soomaaliyeed waa inay qoryaha iska dhigaan, kadibna ay bilaabaan dib u dhiska dalkooda, oo ay xoolo dhaqasho iyo wax beeris ay bilaabaan, si ay dalkooda u quudiyaan intay dalalka kale ugu tiirsanaan lahaayeen,sideebaad hub iyo rasaas ugu badalateen waxbarashada, fadlan midooba oo dalkiina dhisa.
June 12, 2012 @ 05:41:19AM
Sida kaliya ee arrinkan si kama dambays ah loo xalin karaa waa iyadoo la adeegsado gumaad bilaa naxariis ah. Hadii wax naxariis ah la muujiyo, waxay ariinkaas ka dhigan doonaan fursad ay dib isugu habeeyaan, oo ay dib u abaabulaan dhaqaalahooda, kadibna ay marlabaad argagixiso bilaabaan.
June 12, 2012 @ 05:33:35AM
Soomaaliya waanu jecelnahay, laakiin waxaad moodaa in iyaga laftoodu aysan is jeclayn, waxay u baahanyihiin inay naftooda u fekeraan oo ay si wada jir ah u fikiraan oo aysan gooni ama qabaa’il u kala fikirin. Dadka soomaaliyeed ha ka takhalusaan alshaabab, oo ha yeeshaan dawlad qaran, taasoo u shaqaysa dhamaan dadka soomaaliyeed iyo dadka muslimka ah guud ahaan.
June 12, 2012 @ 03:11:59AM
Soomaaliya waxay u baahantahay nabad waarta, waayo nabadeenu waxay ku xidhantahay tooda, sababtoo ah waxa isku mid ah dadka daga labada dhinac ee xuduuda, markaa waxaan leeyahay howsha halloo dhammaado, laakiin kuwii dadka laayay ee burburka gaystay iyagoo ku andacoonaya fikrad been-abuur ah, iyagoon u aabo yeelayn in diinta islaamku tahay diin nabadeed, kuwaas waa in marka hore ay qaadaan masuuliyadda falalkooda, ka hor intaysan mujtama soo dhex galin. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu dadka soomaaliyeed uu nabad siiyo.
June 12, 2012 @ 02:25:30AM
Ilaa imika anigu maannan awoodin inaan fahmo fikirka kooxda alshabaab ay haysato. Jidh-dilka dumarka iyo caruurta lagula kacaa waa wax ay waajib tahay in si bilaa naxariis ah loogala hortago rasaas. Markaa rasaastaasi iyagana dhankooda ha lagu rido.
mohamed keir husein
June 11, 2012 @ 11:50:38PM
aniga waxaan ahay mohamed keir husein [soodaani] ugu horrayn waxaan ku faraxsanahay in dalkeena soomaaliya uu mar labaad noqon doono meel nabdoon, sababtoo ah waxaan in badan ku jirnay dagaal, markaa waxaan jecelahay inaan dhiirigaliyo dhamaan walaalahayga afrikaanka ah, si ay u taageeraan hadafkan, intaa kadibna waxaan awoodi doonaa in dalkeena aan dib u dhisno, waanad mahadsantihiin – anigoo ah soodaani, Nairobi Kenya
June 11, 2012 @ 09:24:02PM
Kacdoonka ka socda Zanzibar wuxuu la mid yahay kii kooxda Booko Xaraam ee nayjeeriya ka hawlgasha iyo kii kooxda alqaacida, markaa haddaynu nahay reer tansaaniya, waa inaynu cagta marinaa dhagarqabayaasan!!! Xukuumada Zanzibaar jaas ayay la ciyaaraysay nimankan ilaa 2001-dii, ilaa wakhtigaasna ma aysan dhicin in qof ka mid ah dadkaas la horkeeno maxkamad, mudadaas sanadaha ah gudaheed. Markaa waxa la odhan karaa waxaa xukuumada ku jira hogaamiyayaal ku lug leh arrimahaas.
June 11, 2012 @ 02:16:11PM
Warkaan wax sal iyo raad toona leh ma aha...cida qortayna waaba cid hurdaysa
June 11, 2012 @ 01:45:36PM
ha la laayo dhamaan la haystyaasha alshabaab
June 11, 2012 @ 09:00:01AM
Dagaalyahannada kooxda alshabaab hadda way cawa-dhaceen, waxaanan si adag ku talinayaa oo aan leeyahay “dadka Soomaaliyeed jaanis u siiya inay dib u dhisaan dalkooda, hala iska ilaawo wixii tagay, oo mustaqbalka hala dhiso.
June 11, 2012 @ 08:46:52AM
kooxda alshabaab dhamaantood cadaabta ha kasoo cabaan, waayo shicibkii ayaa gacmohooda ku le’eday, waxaanay six un u turjumeen quraanka kariimka ah, diinta islaamka ahna waxay ka dhigeen diin argagixiso. Kooxaha al-Shabaabiyo al-Qaacida waa qaar aad ugu mamay dhiiga bini’aadamka. Run ahaantiina waxaan jecelahay inaan mahadnaq usoo jeediyo dadka ehlu diinka ah ee kamida kooxda Ahlusunna, kuwaasoo jabiyay kooxda alshabaab oo ka safeeyay badhtamaha Soomaaliya.
June 11, 2012 @ 08:29:46AM
Arrinku waa laba midkood, ama inay isa soo dhiibaan ama inay geeri isu diyaarshaan, waayo afrika waxay rabtaa inay horumarto, wakhtigii kooxaha argagixisada ah loo dulqaadan jirayna wuu soo dhamaaday in mudda ah kahor! Anagu waanu ka daalnay dhagarqabayaashan!!!
June 11, 2012 @ 08:10:24AM
In badan ayaan rajo ka qabay inaan arko dalkan oo marlabaad nabadi ka dhalatay, waxaan arkaa soomaaliya oo mixnad iyo qalaanqal ku jirta, da’dayduna waa 43 sanadood. 22 sanadood kadib dhibaatooyinkaas, dalka haatan yididiilo badan ayaa ka jirta, taa fadligeedana waxay iska leh ciidamada isku dhafan ee ka socda afrika, kuwaasoo ujeedadoodu tahay inay badbaadiyaan dalkan iyo dadkan. Dhagarqabayaashan diinta sabab uga dhiganaya inay dagaal bilaabaan oo dadkoodana ay saboolnimo gayaysiiyaan si tartiib-tartiib ah ayay u dhamaanayaan, waxaana dadka loo soo celin doonaa xorriyadda ay waxay doonaan ku caabudi karaan. Anigu waxaan ahay qof kiristaan ah, waxaanan leeyahay asxaab aad u badan oo muslim ah, kuwaasoo aad iila waafaqsan inay jiraan kooxo caga-juglayn badani ku dheehantahay oo diintana si xun u adeegsada. Waxaan aad u rajaynayaa inaan arko dumarka iyo caruurta caadiga ah oo soo ceshaday xorriyadoodii, oo awood u helay inay raadsadaan quudkooda, iyagoon sugayn mucaawinooyinka loo fidiyo, kooxahan maleeshiyada ah ee jaahilka ahi waxay rabaan inaysan dadkaas tani u suurto galin. Kooxda alshabaab waxa gacantooda ku iskuul waayay caruur yaryar, gaar ahaan kuwa kasoo jeeda qoysaska saboolka ah, waxaanay alshabaab caruurtaas soo mariyeen wakhtiyo qalafsan. Dhanka kale, caruurta kasoo jeedda qoysaska ladani way yaaceen wakhti dheer ka hor, waxaanay heleen nolol meeqaan wacan, laakiin waa sidee xaalka kuwa aan waligood dalka ka bixin ee ay maleeshiyadasi cadaabta soo mariyeen. Waxaan ilaahay ka baryayaa inuu dalka wax wanaagsan ka dhaliyo, oo uu dalku najaxo.
June 11, 2012 @ 07:30:18AM
dadka soomaaliyeed waxay xaq u leeyihiin nabad inay helaan, waxaanan maalin walba u ducaynaa inay nabadi dhalato, cidina ma gaydo inay u dhimato macaluul iyo dagaal wakhtigan ay dunidu marayso. Waxaan soo dhawaynaynaa kuna faraxsannahay ciidamada AMISOM iyo kuwa KDF, waxaanay ku amaanan yihiin geesinimada ay la yimaadeen ee ay dadka soomaaliyieed kaga xoreeyeen cidii cadaadiska ku haysay……”Jeelka ayaan ku jiray, markaasaad adigu isoo booqatay”…ilaaha wanaagsan ee dadka xoreeya waxaan ka baryayaa inuu soomaaliya xoreeyo... Aniga oo ah Joan Kericho, Kenya
June 11, 2012 @ 05:35:10AM
Ilaahay marka ay tiisa noqoto, cidina ma baajin karto, markaa waxa la joogaa xiligii ay soomaaliya soo kici lahayd.
June 11, 2012 @ 04:05:05AM
Kooxda alshabaab fursad qaali ah ayaa hor taala, markaa waa inay ama joojiyaan dhibaatada ay dadka aan waxba galabsan ka dhex wadaan oo ay isu soo dhiibaan dawlada, ama waa inay rasaasta xejistaan marka aanu dushooda ku ciyaarno goobaha dagaalka.
June 11, 2012 @ 01:34:56AM
Dadka soomaaliyeed waa dad ilaahay abuurtay, isagoo kaliyaana hagi karaya. Cida ku andacoonaysa in soomaaliya ay xukunka alqaacida hoos tagi doonto, cidaasi ma waxay u malaynayaan in dadka buug lagu hagi karo? Anigu waxaan qabaa in buugaa laftiisa xitaa lagu sheegay inay waajib tahay in dadku is jeclaadaan, markaa marka ay dadka nafta ka jaraan, waxaasi ma jacaylkii buuga lagu sheegaybaa? Qofkii nolosha neceb, sideebuu ilaahay kuu siin karaa nolol, si aad dadka kale noloshooda uga qaadid?
June 10, 2012 @ 05:17:11PM
Si dhaqso ah ayay Soomaaliya u noqon doontaa dal nabdoon, waxaana aynu dhaqaala ahaan la tartami doonaa dalalka reer yurub, waxaana aynu shaqaalaysiin doonaa kumaan kun oo reer Kenya ah oo ah jaamiciyiin bilaa shaqo ah, markaa noosoo duceeya fadlan.
June 10, 2012 @ 03:43:41PM
aniga way ila wanaagsantahay shaqada ay wadaan AMISOM, waxaanan leeyahay halkaa kasii wada, oo daafaca dalka soomaaliyeed iyo dunida dhamaanteed.
June 10, 2012 @ 01:57:54PM
Waxaan rajaynayaa in markan ay soomaaliya si joogto ah u dagi doonto.
June 10, 2012 @ 01:55:35PM
Alshabaab…!!! Kooxdan waa in la DILAA dhamaantood, sababtoo ah waxay dalka u horseedeen daganaansho la’aan iyo xaalad aad u xun. Hadii iyagu aysan dan ka lahayn nolosha bini’aadamka, iyagana yaan dan laga galin…!!! Waa in gabigoodaba dunidan laga tirtiraa.
alhaji m mpenda
June 10, 2012 @ 01:34:48PM
Hadaladaasi waa qaar ay soo tabiyeen saxaafaddu, sababto ah dagaalku wali wuu ka socon doonaa soomaaliya muddo dheer, waayo dagaal loogu jiro in nabad lagu keenaa maaha mid ay fududahay in si dhib yar loo soo afjaro. Sida ay tahay in la yeelaa waa in la wada fadhiisto, oo la helo sababta dhibtu waxay tahay, dabeedna si nabadi ku jirto loo xalliyo, iyadoon qori caaradii wax lagu xallinayn, waayo xitaa anigu waxaan diyaar u ahay inaan naftayda ku waayo jihad. Kooxda alshabaab waxaan leeyahay si wacan ayaad u shaqayseen mar haddaad jihad ku qaadeen gaalada, waayo waxaad tihiin qaar u dagaalamaya diinta ilaahay, markaa abaalmarintiina waxaad ka heli doontaan ilaahay agtiisa.
June 10, 2012 @ 12:38:08PM
Waa inaan laysku halaynin dadaal kasta oo ay wado dawlad ama ashkhaas cidday doonaan ha noqdeene (dadaalkaas oo ay inagu siinayaan warar wax ku ool ah oo inagu hagi kara soo qabashada kooxda alshabaab). Waxaan leeyahay aynu nabada qaadano oo aynu soomaaliya ka samayno jawi soo dhawayn leh. Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu helo jawi nabdoon oo soo dhawayn leh. Markaa aynu dhamaanteen halgan u galno dagaalka loogu jiro soo dhicinta xuquuqal insaanka ay waxyeelada u gaysteen kooxahani. Dhamaantiin nabadi korkiina ha ahaato.
June 10, 2012 @ 12:29:46PM
Kooxda alshabaab waxay la mid tahay kooxda alqaacida, labada midkoodna ma aha urur islaam ah oo sharci ku taagan. Run ahaantiina falalkoodu waa qaar liddi ku ah qur'aanka kariimka. Hadii soomaalidu ay doonayaan dawlad islaam ah, miyay garan waayeen inay la tashadaan Sucuudiga? Dadka soomaaliyeed waxay xaq u leeyihiin inay helaan dal nabad ah, mana gayaan in dalkoodu gala jajabo. Haatan waxa jirta fursad qaali ah, markaa waa in dhamaan dadka soomaaliyeed ee geesinimada iyo maskaxda lihi ay ku noqdaan dalka oo ay soo celiyaan qarankoodii qiimaha badnaa, waana inay hubiyaan in kooxaha jaahilka ah inta yaree kasoo hadhay in la dabar-gooyo.
June 10, 2012 @ 11:42:08AM
SHAQO WACAN AYAY QABATAY AMISOM, HALKA KA WADA HAWSHA.
June 10, 2012 @ 10:29:03AM
Kooxda alshabaab waa in la dabar-gooyaa oo aduunkan laga gumaadaa, iyaga iyo wixii la hal maala ee bahalnimo iyo falal bulshada ka dhan ah gaysta. Cafis hadii loo fidiyo kuwan waxay wakhti u heli doonaan inay isu diyaariyaan inay si aan kala go’ lahayn dhiiga dadka u daadshaan.
June 10, 2012 @ 10:00:33AM
Waxa la joogaa qarnigii 21aad, oo ah goob ay dadka gacan ku dhiiglayaasha ah ee dilla dadka aan waxba galabsan aysan boos ku lahayn, naartana ay tahay hoygooda. Aniga waxaan dhiira galinayaa oon taageerayaa in la daldalo sida ugu dhaqsiyaha badan. Wax nabad ah ama naxariis ah ama wada hadal ah yaan loo fidin lana tusin shayaadiintan bahaloobay, oo yaan xitaa loo ogolaanin inay neefsadaan.
June 10, 2012 @ 09:46:25AM
Dadkani waa inay qoryaha iska dhigaan oo ay dalkooda dhisaan.
June 10, 2012 @ 09:34:59AM
Himilada soomaaliya ee ah nabadgalyo inay heshaa waxay u muuqataa mid soo dhawaanaysa, waxaanan leeyahay dadka soomaaliyeed ha helaan himiladooda! Waxaan leeyahay yaan dhiig dambe dalkan lagu daadinin. Walaalayaal soo dhaweeya nabadan oo dalkiina dib u dhisa si aad u heshaan barwaaqo. YAAN DHIIG DAMBE LA DAADININ!
June 10, 2012 @ 08:49:32AM
Halkaa kasii wada shaqada wacan, waxaanan leeyahay aynu gacmaha is qabsanno si aynu dib u dhis ugu samayno dalka soomaaliyeed.
June 10, 2012 @ 08:44:31AM
Ilaaha wayn ayaa la jira alshabaab, taasaana keentay inay kooxdu dagaalka kaga adkaato cadawgeeda.
June 10, 2012 @ 07:25:41AM
Waxaan hambalyo u dirayaa ciidamadeena difaaca Kenya iyo ciidamada AMISOM. Aniga dhagahaygu ma maqli karaan magacyada qabqablayaashan dagaal ee in badan daadinaayay dhiigga dad aan waxba galabsan. Kaftan wayn weeye in ay kuwani rabaan inay isbadal la yimaadaan oo ay kusoo biiraan xukuumada soomaaliyeed!! Arrinkaas oo kalena maaha in laga yeelo, waayo kuwan xitaa shaydaanka naarta dhex fadhiyaa umuusan dambi dhaafeen kamanuu cafiyeen waxay dambi galeen. Dadkani mujtamaca waa ku nijaas, waayo waxay gaysteen dhagar kasta oo qofka maskaxdiisa kusoo dhici karta, dhagarahaasoo ah qaar ka dhan ah bini’aadamka. Dadkani waa qaar bilaa qalbi ah, oo bilaa damiir ah oo bilaa maskax ah…waxba ma hayaan!!...waa ay dagaalamaysa!!...oo lamida horjoogohoodii Osama bin Ladin, waxan soo jeedinayaa ha la go’doomiyo oo kadibna badwaynta hindiya halagu aaso, si ay dadku ay xasuustooda uga masaxaan oo ay ilaawaan noloshoodii nacdallayd iyo dunuubtii ay dunidan ka gaysteen..
Michael Walunya Okutoyi
June 10, 2012 @ 07:10:56AM
Dal kasta oo ka mid ah dalalka afrika waxa ka jirta khatar kusoo fool leh oo dalkaas kala jabin karta. Tusaale ahaan, dalka Botswana oo iyagu ku andacooda inay yihiin dal aan la kharribi karin, waxa dalkaas aafeeyay oo ku habsaday cudurka dilaaga ah ee AIDS ka. Dhanka kale, dalalka galbeedka afrika waxay khatar ugu jiraan had iyo goor inqilaabyo iyo kacdoono ay fuliyaan ciidamadu. Run ahaantiina waxay dadka reer nayjeeriya doorashooyinkii Kenya ka dhacay 2002 ku tilmaameen “inqilaab madani ah”. Markaa intii soomaaliya lagu wareeri lahaa, dawladaha kale ee afrikaanka ahi indhasaabka ha iska qaadeen oo wax ha arkeen. Masiibada ka jirta soomaaliya waa mid si aad ah ugu xidhan dadka soomaaliyeed ee qurbajooga ah halka ay ku dambeeyaan, oo ay ama noqdaan qaxooti ku nool kaamamka, ama ay noqdaan qaar horumar gaadha. Haddii ay dawladaha afrika mid waliba qol-qolkeeda ama gurigeeda xaaqdo, soomaalida laftooduna si otomaatig ah ayay nabad u gaadhi doonaan, iyagoo ay taas ku kalifidoonto baqasho ay ka baqanayaan inay noqdaan dawladda kaliya ee afrikaanka ah ee fashilantay.
June 10, 2012 @ 05:47:09AM
Kooxda alshabaab waa inaysan quusan, kooxdooduna waa inaysan baqanin sababtoo ah waxay aaminsanyihiin waa wax iyaga la wacan, waanay guulaysan doonaan. Anigu ma arko sababta dadkan loo nacayo ee loola dagaalamayo. Waxan leeyahay ha lasiiyo jaanis hana la dhagaysto.
June 10, 2012 @ 03:55:02AM
Ma odhan karaan in ay u dagaalamayaan diinta, sababtoo ah waxay dad badan oo soomaaliyeed oo aan waxba galabsan oo dalalka jaarka ah nabadgalyo u doontay ay u horseedeen in laga shakiyo oo ay FBI du ku raad joogto. Waxa hubaal ah inay kooxahani ciqaab mudan doonaan maalinta qiyaamaha.
June 10, 2012 @ 02:11:57AM
Ilaahay waxaan ka baryayaa in nabad iyo cadaalad ay ka dhalato oo ku baahdo gabi ahaan soomaaliya!! –Dickson-Mombasa
June 10, 2012 @ 12:32:24AM
Kuwa hubkooda soo dhiiba waa in cafis loo fidiyaa.
June 9, 2012 @ 07:31:31PM
Maqaalkani waa maqaal dadka mooraalka u dhisaya oo dhiirigelin badani ku jirto, sababtoo ah waxaan rabnaa inaan aragno soomaaliya oo nabadowday, oo horumartay, oo tacliin wacan yeelatay, oo dadkoo dhamina ku barwaaqoobeen. Kooxahan dagaalamayaa waa inay hubka iska dhigaan oo ay tamartooda wax waxku-ool ah oo faa’ido leh ay ku qabtaan. Dhamaan dhibaatooyinka haysta soomaaliy si dhakhso ah ayay u dhamaan doonaan, laakiin waxaad moodaa ra’yiyada meesha ku qoran qoorkood inay yihiin kuwii Sadam Hussein iyo Osama Bin Laden, waxaan u jeedaa dadka sidaas u hadlayaa waa dad uu jab soo foodsaaray.
June 9, 2012 @ 07:12:46PM
Kooxda alshabaab waxaa ka dhex jira kala jab, laakiin kooxdu arrinkan masoo shaac bixin karto, cidkalena uma ogola inay ka hadasho arrimahan oo kale, sidaad ku sheegatay maqaalkaagan. Labada kooxood ee alshabaab iyo alqaacida midkoodna ma ogolaato in wax kulan ah lagu qabto meelaha ay ka taliyaan ee gacantooda ku jirda, xitaa hadii ay kulaankaas dalbadaan dad iyaga ka mid ah oo wax saluugsan. Waxa kaloo iyaduna jirta koox la dhaho Amniyaad oo iyado qudha ka goysa cid kastoo isku dayda inay kulamo ama shirar noocaas ah qaban qaabiso.
June 9, 2012 @ 12:36:20PM
Runtii kooxdani way mutaysteen arrinkaa, waayo dadkii ayaa gacmohooda ku dhibaatoobay. Waxaan hambalyayanayaa ciidamada iyo dawlada oo labaduba si wayn naftooda u huray. Waxaa mahad iska leh ciidamada difaaca dalka Kenya, waxaanay ku mahadsanyihiin shaqada ay qabteen ee amaanta mudan. Ilaahay ha barakeeyo.
Tr Sam Ngeru
June 9, 2012 @ 11:24:06AM
Alshabaab waa cadeed sii dhacaysa, waxaanay u egtahay waxa aynu hadda aragnaa waa nafxaraarihii oo naftii ayaa kasii baxaysa!
June 9, 2012 @ 09:34:32AM
waxay dhici karaysay inay shalayba baxaan
June 9, 2012 @ 08:27:03AM
Waa si wacan, dad badanina waxay u malaynayeen inaan arrinkaasi soomaaliya ka dhici doonin. Laakiin way dhacday waanay dhici doontaa, waxaana aynu arki doonaa dad soomaaliyeed oo dhoolacadaynaya.
June 9, 2012 @ 07:41:29AM
Kooxda alshabaab waa inay cafis ka dalbataa dadka soomaaliyeed ee ay laayeen, waayo dadka ay laayaan intooda badani waa soomaali, waxaana hadda la joogaa xiligii ay iskuo soo dhiibi lahaayeen dal soomaaliyeed oo nabdoon oo cusub.
June 9, 2012 @ 07:39:27AM
Sida la ogyahay, dagaalka guul in laga gaadho wax badali karaa ma jiro, markaa dagaalka si bilaa cabsi ah u wada. Carruurta soomaaliyeed xorriyad ayaa usoo socota.
June 9, 2012 @ 07:02:25AM
Dawlad kasta oo ka mid ah dawladaha soo koraya, nabadgelyadu muhiimad wayn ayay u leeday, mana aha suurto gal in nabad la’aan iyo dagaal horumar lagu gaadho. Waxaanu ilaahay ka baryaynaa in walaaleheena soomaaliyeed ay nabada qaataan si ay mustaqbalkooda u hagaajiyaan. Taariikhdu si bilaa naxariis ah ayay ula xisaabtami doontaa, iyagaana ka masuul noqon doona umul-dooxa ay gaysteen. Aduunku ha isu yimaado oo ha gacan qabto qarankan, aad ayaanan u taageersanahay dadaalka ay wadaan ciidamada AMISOM, iyo kuwa difaaca kenya, iyo kuwa dawlada federaalka ku meel gaadhka ah ee soomaaliya. Dhamaanteen waan ka simanahay ducada, guushuna dhakhso ayay ku imaan doontaa!!!
June 9, 2012 @ 05:47:30AM
in shaa alaah macirib go idoonaan al shabaab
June 8, 2012 @ 07:50:09PM
cid ama koox bini’aadamka ka mid ahi oo dunidan ku nooli maaha inay waligeed ku fikirto inay ka caagan tahay geerida, taasoo ay sabab uga dhigato inay dadka kale gumaad kula kacdo. Bini’aadamku dhamaantood ilaahay way u siman yihiin, cidkastoo soodh wax ku dishaana soodh ayaa lagu dili iyadana. Nolosha qof kastoo bini’aadam ahi waa muqaddas, cawaaqib xumada uu qofka dhagar gaystaa dunidan kula kulmo ka sokow, waxaa maalinta qiyaamaha ee la isa soo saari doono ka dambaysa xisaab. Horgoogayaasha kooxda alshabaab iyo koox kastoo dhagar qabta oo mustaqbalka iman doonta waxaa ku waajib ah inay cashar bartaan wixii ku dhacay kooxihii iyaga ka horeeyay, kuwaaso noloshoodii ay burburtay iyagoon ka tagin wax dhaxalgal ama taariikh ah. Dad badan ayaa dhiigoodii daatay, qaar kalena noloshoodii ayaa burburtay oo waxay ku dambeeyeen laxaad la’aan, saboolnimo, agoonimo, carmalnimo, qaxoontinimo iyo hoyla’aan. Dadkaas oohintooda cid uunbaa laga xisaabin doonaa. Wax wada hadal ah maaha in lala galo gaangistaradan, waayo waxay mutaysteen in ciqaab daran la mariyo, intaa wax kabadan ama wax ka yar looma baahna. Dadkani waxay dadka reer Kenya u gaysteen dhibaato iyo caddibaad aan laga sheekayn karin, iyo waliba war war dabcan. Sang Richard - Nairobi kenya
June 8, 2012 @ 12:28:45PM
Anigu aad ayaan u taageersanahay dawlada Kenya, waxaanan ku taageersanahay talaabada muga leh ee ay qaadatay, taasoo ay ku go’aansatay inay la dagaalanto kooxda alshabaab si dalka soomaaliyeed loogu soo dabaalo nabad, kalgacayl, midnimo iyo is fahan. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ciidamada Kenya awood iyo cudud siiyo si ay u tirtiraan kooxdan sharcidarrada ku dhisan, ee aan bini’aadamka ahayn ee argagixisada faafinaaya.
June 8, 2012 @ 09:19:39AM
runtii waa inaan cidina rumaysanin in kooxda alshabaab ay dhamaan doonto, sababtoo ah su’aashu waa ciidu miyay dhamaandoontaa? Jawaabtuna waa maya oo waligeed way jiri doontaa, waanay jiri doontaa kooxda alshabaab marka ay gacanta ku dhigto aduunka oo dhan, wakhtigaasi ha dhawaado ama ha dheeraadee, waxaanay aduunka ku dhiqi doonaan shareecada islaamka.
June 8, 2012 @ 08:02:38AM
Kitaabka injiilku wuxuu dhigaya in cidii soodh wax ku disha iyadana isla soodh kaas lagu dilo, lakiin (siday kiristaanku aaminsanyihiin) nabi ciise dambigeena ayuu dhintay, dambigeenii oo dhanna sidaas ayaa lagu dhaafay. Markaa inagu sideebaynu u diidi karnaa inaynu dadkale cafis u fidino? Markaa aniga waxay ila tahay hadday balan qaadaan inay isbadal la yimaadaan, waa in jeelka lagu hayaa sababtoo ah lama garan karo ajendahooga. Markaa waxan leeyahay jeelka ka la dhigo nimanka intii la layn lahaa. Ilaahay ha idin barakeeyo - waa anigoo ah linette abuko Rongai
June 8, 2012 @ 07:13:06AM
Way mutaysteen waxaa ku dhacay, sabtoo ah dadka dhibaato badan ayay u gaysteen.
June 8, 2012 @ 07:06:38AM
Wakhti dhaw ayaa ciidankan itaalka darani baabi’i doonaa, waxaana weeyaan in maraykanku uu internetka soo galiyo sawirrada gacan ku dhiiglayaasha kooxda alshabaab. Waxa laga yaabaa in qaarkood ay kasoo fakadaan ciidamada amaanka xuduudeena, kadibna ay dalkeena soo galaan, markaa waa in lagu raad joogaa oo la ugaadhsadaa. Waxaan leeyahay roob ayaa day’ay, oo waa cusub ayaa baryay.
June 8, 2012 @ 05:39:12AM
Wakhtigii wuu ka dhacay argagixisada, waxaana dadka soomaaliyeed ay ku jiraan isbedel balaadhan oo ay ku gaadhi doonaan barwaaqo. Markaa talaabada caqligalka ah ee ay tahay inay dagaal yahannada alshabaab qaadaan waa inay isa soo dhiibaan, oo ay cafis ka dalbadaan dadka soomaaliyeed oo ay kusoo biiraan dadkooda, si ay gacan uga gaystaan dib u dhiska dalkooda.
June 8, 2012 @ 04:11:10AM
khayr badan ayaan u rajaynaya dalka nala jaarka ah ee soomaaliya, waxaanan rajaynayaa inuu ilaahay soo dhex galo oo uu nabad korkooda yeelo.
June 8, 2012 @ 04:07:22AM
ciidamada difaaca ee Kenya waa inay kooxda alshabaab ka saaraan magaalada kismaayo, oo ay naarta ku daraan.
June 8, 2012 @ 03:53:38AM
Intiina mujaahidiinta aan afxumayn maahee intiina kale naarta ku fogaada, waxaan ilaahay dhaar ugu maray in dalkan aan lagu xukumi doonin waxaan kitaabka quraanka ahayn. Hadaanu anagu nahay soomaali, waligayo u ogolaanmayno cadawga ilaahay inay na xukumaan, waayo waxaano hore ula soo dagaalanay ingiriis, iyo talyaani, iyo masaska midoobay, waana ilaahay mahaddi mar hadii aan dhammaantood ka adkaanay. Gaaladu waxay dhahaan “taariikhdu dib ayay usoo noqotaa”, markaa iyadoo ay maanta reer galbeedku khatar ugu jiraan inay qaxootinimo galaan, ayay haddan moodayaan inay na baabiin karaan, laakiin iyadoo ay taasi u suuroobi wayday shalay markay maalka haysteen, jawaabtu waa maya oo maantana waxba naga qaadi maayaan.
June 8, 2012 @ 03:30:39AM
Dadka gaangistarada ah adduunkan meeli ugama banaana.dadka soomaaliyeed in badan oo dhibaato ugu filan ayay soo kadeednaayeen, markaa waxa haatan la joogaa xiligii ay dadka soomaaliyeed nabada ku majiiran lahaayeen. Ilaahay ha barakeeyo soomaaliya iyo dadkeedaba, mar hadii ay haataan casri cusub galayaan.
June 8, 2012 @ 03:08:09AM
Waa in la joojiyaa kulamadaas oo ay isu soo dhiibaan dawlada TFG da iyo ciidamada Amisom. Kooxdani waxay ku koreen oo ay ku noolaayeen fawdada dalka ka jirta, markaa maaha qaar la aamini karo, wax wada hadal ahina ma uu jiro. Anigu ma taageersani xukunka dilka ah in dadka lagu fuliyo, laakiin dadkan waa in la horgeeyaa maxkamada Hague, waana dadka ay tahay in loo geeyo oo ay macmiil uu noqdaan garsoore Luis Ocampo, oo madaxa maxkamada Hague. Waa in addunkoo dham ogaadaa in argagixisadu aysan meel ku lahayn dunidan.
Lydiah .N. Karori
June 8, 2012 @ 03:06:45AM
Arrinkani waa arrin xaga ilaahay ka yimid. Haddii aynu sii wadno midnimada iyo allabariga aynu ku jirnay intii dagaalkani bilawday, waxa hubaal ah in arrimo badan oo aad u wacani ay inoo suurtoobi doonaan. Injiilku wuxuu sheegayaa: “haddii dadkaygu ay isu kay duleeyaan oo ay I baryaan oo ay wajigayga dalbadaan oo ay ka waantoobaan dariiqyada khaldan ee ay raacaan, markaa aniguna samada dusheeda ayaan ka maqli ducadooda, waanan ka saamixi doonaa dambigooda, dhulkoodana waan u barwaaqayn”. Markaa waxaan dadka reer Kenya usoo jeediynayaa, aynu jilbaha qabsano oo aynu allabari u samayno qarankeena iyo soomaaliya labadaba.
June 8, 2012 @ 02:58:53AM
Wararka qaarkood waa buunbuunin iska cad. Waxan oo dhani waa dacaayad. Kooxda alshabaab waa dhalinyaro islaam, dhalinyaradaasna waligood la waayi maayo ilaa inta qiyaamuhu imanayo. Waxaan idin leeyahay joojiya buunbuuninta aad waddaan idinka iyo jaraa’idkiinu, kuwaasoo ka mid ah nidaamka kaniisadaha. Ak a oroond
June 8, 2012 @ 02:12:21AM
Runtii waxa hadda dhacayaa waa wax muhiimad u leh dunidan hadda jirta ee aan dooneyn in bini’aadanku ku noolaadaan mashaakil iyo dagaal bilaa macni ah. Gaar ahaan marka qofku ka fikiro in dadka dhimanayaa ay yihiin dad aan waxba galabsan. Waan jecelahay arrinkaas.
June 8, 2012 @ 01:27:25AM
Ciidamada afrika ee soomaaliya joogaa waxay xanuujiyeen ogre, markaa waa inuu aad u baroortaa.
June 7, 2012 @ 08:37:54PM
Nabadu waa wax wacan, nidaam la’aantuna waa wax aan wacnayn, waana in aynu arrinkaa mahadnaq ka celinaa.
owuor ja lweny
June 7, 2012 @ 07:41:44PM
Kooxda alshabaab waa koox argagixiso ah, mana aha in wax naxariis ah la tuso, xitaa hadday isa soo dhiibaan… kooxdan haddii jaanis kale la siiyo, haddana dib ayay isu soo abaabuli doonaan sannadaha soo socda, markaa waa in gabigoodaba la tirtiraa. Waxaan mahadnaq u dirayaa ciidamada difaaca kenya, kuwa soomaaliyeed iyo kuwa Amisom.
June 7, 2012 @ 12:47:04PM
Waxaan rajaynaynaa in dadka Soomaaliyeed ee aynu jaarka nahay ay helaan dawlad salka dhigtay, cid kastoo dunidan ku noolina waxay rajo ka qabtaa inay aragto Geeska kaliya ee ay Afrika leedahay oo dib usoo ceshaday amaantiisii iyo magacii uu hore u lahaa. Kooxda al-Shabaab fadlan isa soo dhiiba, waayo wakhtigiinii wuu dhamaaday.
June 7, 2012 @ 12:45:16PM
Gacan ku dhiiglayaashu dunidan meel kuma laha, waxaanan ciidamada AMISOM leeyahay halkaa ka wada hawsha, kooxahana badwaynta ku dara.
June 7, 2012 @ 11:56:21AM
Dadkan hadimada wada waa inay soo gaba gaboobaan sida ugu dhakhsaha badan “aniguna waxaan ku farxi lahaa inaan arko iyadoo soomaaliya soo ceshatay nabadgalyadeedii”
June 7, 2012 @ 11:06:51AM
Afrikaanka iyo aduunkuba waa inay dadka Soomaaliyeed ka gacan siiyaan sidii ay noloshoodii caadiga ahayd ula soo noqon lahaayeen. Arrinkaasina waa geedi socod dheer, sababtoo ah guul milatari oo la gaadhaa maaha ula jeeddada kama dambaysta ah, laakiin waa in dadaal siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo habaysan la galaa si loogu saamaxo dadka Soomaaliyeed inay ka dhabeeyaan himiladooda iyo riyadooda ay qabaan ee ah inay nabad iyo caano ku noolaadaan.
June 7, 2012 @ 10:13:52AM
Anigu ma qabo inuu jiro hadal si mug leh wax loogaga sheegi karo kooxahan?? Kooxda alshabaab waa inay ogaataa in ilaahay uusan laynin khalqigiisa, ilaahay khalqigiisa wuu jecel yahay, laakiin bini’aadamka ayaa isku dila sababo nacaybka iyo damaacinimada ay ka keento xaasidnimo iyo nacayb iyo masayr. Dhamaanteen waxaynu caabudnaa ilaah kaliya. Xaalku sidaa noqon mayo illaa aan ahay qof haysta madhabka Patisiga, oo ku haysta magaca alle iyo masiix iyo kan ruuxa, hadday sidaa noqtana ma arki doono awoodda alle. Markaa waa in midkeenba midka kale uu jeclaadaa, iyadoon aynaan u aabo yeelayn diinta aynu ilaahay ku caabudno. Naxariisi dhamaantiin korkiina ha ahaato.
June 7, 2012 @ 09:53:45AM
Maqaalkani waa mid aad u diiran, aad ayaanan ugu farxay horumarka ay gaadheen ciidamada Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ee ku raad-jooga kala firdhinayana maleeshiyada asal raaca ah ee ku mamay quudashada dhiigga dadka Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan. Waxaan leeyahay dhurwaayadan alshabaab halaga tirtiro carriga Soomaaliyeed, si loogu saamaxo dadka Soomaaliyeed inay helaan nabad oo ay kana xoroobaan dadka shisheeyahay gacan saarka la leh ee danohooda gaarka ah wata.
June 7, 2012 @ 06:07:14AM
Arrinkani waa wax dadka Soomaaliyeed la wanaagsan, ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu ciidamada xoraynta awood usiiyo inay tirtiraan kooxda alshabaab.
June 7, 2012 @ 03:48:24AM
Shaqo wacan weeye, waana inaad kismaayo gashaan, iskana ilaaliya inaad cid ka tirsan kooxda alshabaab aad ciidamadiina kusoo dartaan, waayo waxaa laga yaabaa inay idinku soo biiraan iyagoo idin khiyaamaynaya oo wata qorshe kale oo ay dhiig ku daadshaan.
June 7, 2012 @ 03:11:43AM
cadaaladda iyo runtu waligood way ka guulaysan doonaan sharka iyo beenta salka ku haya xagjirnimo iyo mayal adayg diimeed. Stevo Njogu – Nairobi.
June 7, 2012 @ 01:29:19AM
hambalyo ciidamada soomaaliyeed
June 7, 2012 @ 12:47:18AM
Waxaan ilaahay ka baryayaa inay dhamaantood hubka iska dhigaan oo ay isa soo dhiibaan. Dadkani waxay u dagaalamayaan inay raali galiyaan shaydaanka, halka ay ilaahay raali galin lahaayeen. gp from Moyale
June 6, 2012 @ 02:47:27PM
Arrinkani waa mid indhaha furaya oo wacyigalin ah.
June 6, 2012 @ 10:48:27AM
Alshabaab waa in laga tirtiraa dunida guudkeeda.
June 6, 2012 @ 08:11:48AM
Sida naarta u kala jaba.
June 6, 2012 @ 05:33:40AM
kooxaha asal raaca ahi ha waajahaan qoryaha ay aaminsanyihiin qaar la mid ah, oo ha waajahaan qaanuunka. Habkanina waa habka kaliya ee iyaga iyo kuwa ay isku fikirka yihiin wax ku fahmi karaan.
June 6, 2012 @ 03:30:21AM
Ilaaha wayn ee waaxidka ah waxaan ka baryayaa inuu dhibaatada ku habsatay dalka soomaaliyeed uu dalkaas ka dul qaado, oo uu nabad iyo badbaadin dhab ah kusoo dabaalo dalkaas. Ilaaha wayn ee waaxidka ee waaridoona waligiiyoow waxaan kaa baryayaa inaad naxaariistaada na kor yeesho oo aad nolosha silica ah ee carruurta ku jiraan aad ka saarto.
June 5, 2012 @ 12:17:53PM
Kooxda waxa ka dhex jira laba garab: garabka koowaad waa “garabka mayalka adag”, waxaana garabkan xukuna dad shishiiye ah, hogaamiyayaasha kooxda ee Soomaalida ah ee waawayn waxay hoos yimaadaan hoggaanka hor-joogaha kooxda, Abu Subeer ee ku magacdheer “Godane”, kaasoo ay hogaanka kooxda ku weheliyaan dadkaloo shisheeye ah. Garabkan mayalka adag waxa loogu yeedhaa “Mulat Ibrahim”, waana magac laga soo dheegtay quraanka kariimka ah ee oranaysa "Raac waddadii Ibraahiim ee aan alle wax barbar dhigin". Garabka labaad waa garab ka xag-jirnimo yar, waxaana hoggaamiya Mukhtar Roobow Abu mansuur. Garabkani wuxuu aaminsanyahay inay muhiim tahay in kooxda laga dhigo koox Soomaaliyeed oo la dhimo ama la yareeyo doorka ay ajaanibku ku leeyihiin go’aan qaadashada kooxda. Sida ay ilo ka ag dhow kooxdu ay sheegayaan, khilaafka ka dhexeeya labadan garab waa mid aad u qoto dheer, waxaana macquula inuu gaadhoo heer iska horimaad ah. Inta badan khilaafaadka ka dhexeeya labada horjooge ee labada garab wuxuu salka ku hayaa habka ay tahay in loola dagaallamo ciidamada dawlada TFG da ee kaashanaya ciidamada AMISOM, kuwaasoo ah ciidamo ka socda ururka midawga afrika. Dhanka kale, waxay khilaafaadkoodu ku qotomaan is-mariwaa siyaasadeed iyo mid fikir ahaaneed oo ka dhex aloosan, kuna saabsan wadciga ay soomaaliya haatan ku jirto. Intaa waxa dheer, arrimaha ku saabsan xidhiidhka ka dhexeeya dagaalyahanada soomalida ah iyo kuwa shisheeye, iyadoo ay dagaalyahanada shisheeye ay la wareegeen go’aan qaadashada kooxda, sida ay hadalka u dhigeen goobjoogayaal soomaaliyeed.
June 5, 2012 @ 11:37:33AM
June 5, 2012 @ 11:12:44AM
Waxa la joogaa wakhtigii ay soomaalidu ay bilaabi lahaayeen inay u fekeraan sidii dad muwaadiniin ah oo u dhashay qoomiyadaha ku dhaqan bariga afrika iyo halkanba, nabaduna waa amar.
Allan Stephen Said
June 5, 2012 @ 10:59:47AM
maqaalkani war wacan ayuu u xambaarsanyahay dhamaan dadka nabada jecel ee dunida ku nool, markaa arrinkani wuxu farxad u yahay qaarada afrika oo dhan sababtoo ah qof kasta oo afrika u dhashay wuxuu jecel yahay inuu arko qaarada afrika oo ah meel wacan oo nabad ah oo lagu noolaan karo.
June 5, 2012 @ 07:29:15AM
Anigu arrinkaas waan ka helay, inkastoo aan ka murugooday geeridii ku timi Osama bin Laden
wilson murithi meru kenya
June 5, 2012 @ 06:19:54AM
Ciidamada AMISOM shaqo wacan ayaad qabateen, soomaaliyana waa in la xoreeyaa oo ay sida dalalka kale hormartaa. Sidoo kale waa in la joojiyaa daadinta dhiiga dadka aan waxba galabsan. Waxaan leeyahay askarta shaqo wacan ayaad qabateen rutnii, ee hore u socda.
Peter Cabrol Namunyu
June 5, 2012 @ 04:17:33AM
Anigu waan ka helay habka ay ciidamada AMISOM ay horumarka u gaadhayaan! Waxaan leeyahay ciidamada Amisom diirka kasiiba alshabaab oo haada iyo gorgorrada uga taga! Mozilla fadlan qaar kale keen.
June 5, 2012 @ 03:43:14AM
Kuwa dalbada cafiska waa in aan la dilin, balse waa in la xidhaa oo maxaabiis dagaal ahaadaan, waana in summad loo yeelaa, lana ilaaliyaa, dabadeedna shaqo looga dhigaa inay dib udhisaan oo dib hagaajiyaan waxay burburiyeen. Sidoo kale waa in la baraa micnaha ay laedahay noqoshada muwaadin soomaaliyeed oo xadaari ah aan dib usocod eheen. Intaa waxa dheer, waa inay nimankani ugu yaraan 15 sano oo xadhig ah ay dhamaystaan, waayo qofna kuma dhaco inuu la noolaado ama uu hayo dad noocan oo kale ah oo aan dhaqan celin lagu samaynin.
June 5, 2012 @ 12:55:20AM
Arrinkani waa mid yididiilo leh, waxaanan leeyahay halkaa ka haya T5 niyada wanaagsan ee aad ku shaqaynaysaan, waxaanan idin leeyahay baabiiya oo xaaqa shayaadiintan oo ka saara soomaaliya. Mutuku Ben - Thika Kenya